Thit Htoo Lwin: 3/11/12 - 3/18/12
ပြည်​ထောင်စုကြံ့​ခိုင်​ရေး​နဲ့​ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ပါတီ အောင်နိုင်​ရေး​အဖွဲ့​ခေါင်း​ဆောင် ဦး​အောင်သိန်း​လင်း​နှင့်​ဆက်သွယ် မေး​မြန်း​ထား​ပါတယ်။
အတွင်း​မှာ ရွေး​ကောက်ပွဲကျင်း​ပဖို့​က ၁ ပတ် ၁၀ ရက်​လောက်ပဲ လို​တော့​တဲ့​အချိန်မှာ အန်ကယ်တို့​ဝင်ပြိုင်တဲ့​၆ နေရာ စလုံး​ပေါ့​။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီက ဒီ ရွေး​ကောက်ပွဲ စည်း​ရုံး​ရေး​တွေ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်တယ် ဆိုတာ​လေး​အရင်ဆုံး​သိပါရ​စေ။
“ကျ​နော်တို့​၂၀၁၀ တုန်း​ကလည်း​ပြိုင်ခဲ့​တာပါပဲ​လေ။ ပြိုင်ခဲ့​တော့​အဓိက လက်ကိုင် ထား​တာ က​တော့​တရား​မျှတပြီး​တော့​မှ သန့်​သန့်​ရှင်း​ရှင်း​ဖြစ်ဖို့​အ​ရေး​ကြီး​တယ်။ နောက်တခုက ကိုယ် မဲဆွယ်တဲ့​ကိစ္စ​တွေကလည်း​သူများ​ကို အ​နှောင့်​အယှက် မဖြစ်​စေချင်ဘူး​။ ဒါ​ကြောင့်​မို့​လို့​တတ်နိုင်သမျှ သူများ​ကို အ​နှောင့်​အယှက် မဖြစ်တဲ့​နည်း​နဲ့​မဲဆွယ်တယ်။ အိမ်တိုင်ရာ​ရောက်သွား​တဲ့​လှုပ်ရှား​မှု​တွေ ပေါ့​။ လိုက်ပြီး​တော့​မှ သတင်း​ပေး​တဲ့​စနစ်​တွေပါ။ သတင်း​ပေး​တယ် ဆိုတာက​တော့​ကိုယ့်​ကိုယ်စား​လှယ်ရဲ့​လက်ကမ်း​စာ​စောင်​တွေ ဝေတဲ့​စနစ်​တွေကို ကျ​နော်တို့​က ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက လက်ကိုင်ထား​တာ က​တော့​တရား​မျှတမှု ဖြစ်ဖို့​အဓိကထား​တယ်။”
ပါတီအများ​စုက​တော့​အများ​အား​ဖြင့်​အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ​ပေါ့​။ သူတို့​ပါတီက စည်း​ရုံး​ရေး​ဆင်း​တဲ့​အခါမှာ သူတို့​အများ​ကြီး​တွေ့​လို့​ပြောတာ​တွေ ရှိပါတယ်။ မဲစာရင်း​ကွာတဲ့​ကိစ္စ​တွေ။ အန်ကယ်တို့​ပါတီ အ​နေနဲ့​ရော အဲဒီကိစ္စ​တွေမှာ တွေ့​ရှိချက်​တွေကို တင်ပြထား​ခြင်း​ရှိ၊​မရှိ​ပေါ့​။ ဒါကို ကျွန်​တော်တို့​သိချင်ပါတယ်။
“ကျ​နော်တို့​ပြီး​ခဲ့​တဲ့​၂၀၁၀ အ​တွေ့​အကြုံတုန်း​က မဲ​ပေး​ခွင့်​ရှိရဲ့​သား​နဲ့​မ​ပေး​လိုက်ရတဲ့​သူ​တွေ တွေ့​ရပါတယ်။ ဒီ တပွဲမှာလည်း​အဲဒီလို မဖြစ်​အောင်​တော့​ကျ​နော်တို့​တတ်နိုင်သမျှ မဲ​ပေး​မယ့်​လူ​တွေ၊​ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရှိတဲ့​လူ​တွေ မဲစာရင်း​ထဲမှာပါ၊​မပါ လိုက်လံ စိစစ်ပြီး​တော့​မှ၊​မပါ​သေး​တဲ့​လူ​တွေ ရှိရင်လည်း​ကော်မရှင်ကို တင်ပြပါတယ်။ ကော်မရှင်က သတ်မှတ်ထား​တဲ့​စည်မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​နဲ့​ကိုက်ညီလို့​ရှိရင် သူတို့​လက်ခံပါတယ်။ အဲဒါ​လေး​တွေကို ၂၀၁၀ တုန်း​ကလည်း​ကျ​နော်တို့​လုပ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာလည်း​မဲ​ပေး​ခွင့်​ရှိတဲ့​လူ​တွေ အာလုံး​မဲ​ပေး​ခွင့်​ရ​အောင်လို့​ဝိုင်း​ဝန်း​ပံ့​ပိုး​ဆောင်ရွက်တဲ့​သ​ဘောမျိုး​နဲ့​ဆောင်ရွက်ပါတယ်။”
ဒီမိုက​ရေစီပါတီ​တွေကို မေး​ကြည့်​တော့​အခုဆိုရင် ဥပမာ- မင်္ဂလာ​တောင်ညွန့်​မှာ ဆိုလို့​ရှိရင် တော်​တော်ကြီး​မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်။ ပါတီ​တွေက မဲဆွယ်စည်း​ရုံး​နေတာ တွေ့​ရတယ်လို့​သိရပါတယ်။ မဲဆွယ် စည်း​ရုံး​တဲ့​အခါမှာလည်း​၂၀၁၀ တုန်း​ကလို မဟုတ်ဘဲနဲ့​တပါတီနဲ့​တပါတီ ပြောဆိုနှုတ်ဆက် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရင်း​ရင်း​နှီး​နှီး​နဲ့​အိုး​စည်ဗုံ​မောင်း​တွေတီး​၊​ကား​တွေနဲ့​လှည့်​ပြီး​တော့​မဲဆွယ်စည်း​ရုံး​တယ်လို့​ကြား​ရပါတယ်။ အန်ကယ်တို့​ရော မဲဆွယ်စည်း​ရုံး​တဲ့​အ​နေအထား​မှာ ရန်ကုန်တိုင်း​မှာ ဘယ်လိုမျိုး​တွေများ​ကြုံ​တွေ့​ရပါသလဲ။
“ကျ​နော်တို့​လည်း​သူတို့​တွေလို​ပေါ့​။ ၂၀၁၀ တုန်း​ကလည်း​ဒီလိုပဲ ကား​တွေနဲ့​ကိုယ်စား​လှယ်ရဲ့​ဗွီနိုင်း​ကို ကပ်ပြီး​တော့​မှ ရပ်ကွက်​တွေမှာ လိုက်လံ မဲဆွယ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ပြီး​ခဲ့​တဲ့​အပတ် ၁၀ တန်း​စာ​မေး​ပွဲ ဖြေ​နေတဲ့​ကာလမှာ​တော့​ကျ​နော်တို့​အဲဒါ​တွေ ခဏရပ်ထား​တယ်။ ဘာဖြစ်လို့​လဲဆို​တော့​၁၀ တန်း​စာ​မေး​ပွဲ ဖြေ​နေတဲ့​က​လေး​တွေ အ​နှောင့်​အယှက်ဖြစ်မှာ စိုး​လို့​၊​၁၀ တန်း​စာ​မေး​ပွဲက မ​နေ့​က တချို့​တော့​ပြီး​ပြီ။ ဒါ​ပေမယ့်​သေချာ​တော့​မပြီး​သေး​ဘူး​။ တချို့​ဘာသာရပ်​တွေ ကျန်​သေး​တယ်။ ဒီအပတ်ကုန်မှပဲ ကျ​နော်တို့​က သူများ​တွေလိုပဲ ကား​နဲ့​လှည့်​၊​လှည့်​ပြီး​တော့​မှ လက်ကမ်း​စာ​စောင်​တွေလိုက်​ဝေ အဲဒါ​တွေ လုပ်ပါ့​မယ်။
ပြီး​တော့​ဒီမှာ ထူး​ခြား​တာက ပြိုင်မှာက ၆ မြို့​နယ်ထဲဆို​တော့​ကျန်တဲ့​မပြိုင်တဲ့​မြို့​နယ်​တွေက ပြိုင်မယ့်​၆ မြို့​နယ်ကို ဝိုင်း​ကူပြီး​တော့​လုပ်တာ​ပေါ့​။ အား​ဖြည့်​ပြီး​တော့​လုပ်တာ​တော့​ရှိတာ​ပေါ့​။”
တုန်း​က ကြံ့​ခိုင်​ရေး​ပါတီအ​နေနဲ့​ငွေ​ချေး​ပြီး​တော့​မဲဆွယ်တာတို့​၊​လမ်း​ခင်း​ပြီး​တော့​မဲဆွယ်တာတို့​လုပ်ခဲ့​တယ်ဆိုတဲ့​ဝေဖန်သံ​တွေ ကြား​ရပါတယ်။ အခု ကြား​ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲမှာ​ရော အဲဒီလိုပုံစံမျိုး​နဲ့​မဲဆွယ်တာမျိုး​ကို​ရော လုပ်​ဆောင်မှု​တွေ ရှိပါသလား​။
ရဲ့​မူဝါဒမှာ ကျေး​လက်​ဒေသ ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​လုပ်ငန်း​စဉ်ကြီး​၅
ရပ် ရှိတယ်။ အဲဒါ ၅ ရပ်ကို ကျ​နော်တို့​က ထမ်း​ဆောင်တာပါ။ အဲဒီ ထမ်း​ဆောင်တဲ့​နေရာမှာ ကျေး​လက်​နေ ပြည်သူလူထု​တွေ အတွက် လမ်း​တွေ ကောင်း​ရမယ်။ ကျေး​လက်ပြည်သူလူထု ရေရရှိ​ရေး​ဆောင်ရွက်​ပေး​ရမယ်၊​ကျေး​လက် ပြည်သူလူထုရဲ့​ကျောင်း​တွေ ကောင်း​အောင် လုပ်​ပေး​ရမယ်၊​ကျေး​လက်​တွေမှာ ဆေး​ခန်း​တွေရှိရင် အဲဒီ​ဆေး​ခန်း​တွေကို ဝိုင်း​ဝန်း​ပြီး​တော့​စောင့်​ရှောက်ရမယ်၊​နောက်တခါ ကျေး​လက်ပြည်သူလူထုရဲ့​လူမှု စီပွား​ရေး​ဘဝကို ဝိုင်း​ဝန်း​ပြီး​တော့​မှ ပံ့​ပိုး​ရမယ်ဆိုတဲ့​ကျေး​လက်​ဒေသ ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​လုပ်ငန်း​စဉ်ကြီး​၅ ရပ်ဟာ ပါတီရဲ့​လက်ကိုင်ထား​တဲ့​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​လုပ်ငန်း​စဉ် ၅ ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျ​နော်တို့​နိုင်ငံမှာ လိုအပ်​နေတာဟာ ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​နဲ့​တိုင်း​တပါး​ဩဇာခံ
မဖြစ်​ရေး​ဒီ ၂ ချက်က။ အခုလည်း​လိုအပ်သလို နောင်လည်း​လိုအပ်မယ်လို့​ထင်ပါတယ်။ ပါတီရဲ့​မူဝါဒအတိုင်း​ဆောင်ရွက်မြဲ ကိစ္စကို ကျ​နော်တို့​ဆောင်ရွက်ခြင်း​သာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲမှာ ထူး​ခြား​တာက အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဝင်​ရောက် ယှဉ်ပြိုင်လာပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီလိုပဲ ၄၈ နေရာစလုံး​ဝင်ပြိုင်တဲ့​ပါတီပါ။ ကြား​ဖြတ်မှာ ဆိုရင် အဓိက ပြိုင်ဘက်ပါတီလို့​တောင် ပြောလို့​ပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဝင်လာပြီး​သူ့​ကိုယ်စား​လှယ်​လောင်း​တွေ ဝင်ပြိုင်လာတဲ့​အတွက် အခု ကြား​ဖြတ် ရွေး​ကောက်ပွဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီနဲ့​အပြိုင် မဲဆွယ်စည်း​ရုံး​ရာမှာ ဘယ်လိုမျိုး​တွေ ကြုံရဆုံရလဲ။ အန်ကယ်တို့​ဘက်လည်း​ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထား​ပါသလဲ။
“ကျ​နော်တို့​ပါတီရဲ့​မူဝါဒက​တော့​အမျိုး​သား​ရေး​ကို စောင့်​ရှောက်မယ့်​၊​တိုင်း​ပြည်အ​ပေါ်မှာ ဘယ်​တော့​မှ သစ္စာမ​ဖောက်မယ့်​တရား​ဝင်ဖွဲ့​စည်း​တဲ့​ပါတီအား​လုံး​ကို​တော့​ကျ​နော်တို့​က မိတ်ဖက်လို သ​ဘောထား​ရမယ်လို့​ကျ​နော်တို့​ပါတီရဲ့​မူဝါဒလမ်း​စဉ်မှာ သတ်မှတ်ထား​ပါတယ်။ ကျ​နော်တို့​က အဲဒီမူဝါဒကိုပဲ လက်ကိုင်ထား​ပြီး​တော့​မှ ဆောင်ရွက်​နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
၁ ကြား​ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်း​က အန်ကယ်တို့​ပါတီအ​နေနဲ့​၆
နေရာစလုံး​နိုင်မယ်လို့​ယုံကြည်ထား​ပါသလား​။ အန်ကယ် ဘယ်​လောက်အထိ မျှော်လင့်​ထား​ပါသလဲ။
“​လော​လောဆယ်​တော့​ခန့်​မှန်း​ရ ခက်​သေး​တယ်။ ကျ​နော်တို့​လည်း​အခု တတ်နိုင်သမျှ ကြိုး​စား​ပြီး​တော့​ဆောင်ရွက်​နေတုန်း​ပါပဲ။ ရွေး​ကောက်ပွဲ တခုဆိုတာက​တော့​ဘယ်​လောက် သေချာတယ်၊​မ​သေချာဘူး​ဆိုတာက​တော့​ပွဲပြီး​မှပဲ အ​ဖြေသိတဲ့​သ​ဘောပါပဲ။”
ဖြည့်​စွက်​ပြောလိုတာ ရှိရင် ပြောပြ​ပေး​ပါ။
“ကျ​နော်တို့​က ဒီ​ရွေး​ကောက်ပွဲမှာ တရား​သဖြင့်​အေး​အေး​ချမ်း​ချမ်း​နဲ့​စည်း​ကမ်း​ရှိရှိ အနိုင်ရ​အောင်လို့​ဥပ​ဒေ​ဘောင်ထဲကပဲ ကြိုး​စား​ပါမယ်။ ကျ​နော်တို့​ကြိုး​စား​သလို တခြား​ပါတီ​တွေကိုလည်း​အဲဒီလို ဖြစ်​စေချင်ပါတယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေး​အေး​ချမ်း​ချမ်း​နဲ့​စည်း​ကမ်း​ရှိရှိ တန်ဖိုး​ရှိတဲ့​ကြား​ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲ ဖြစ်​စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်​အောင်လည်း​ကျ​နော်တို့​အစွမ်း​ကုန် ကြိုး​စား​နေပါတယ်။ တရား​သဖြင့်​နိုင်တာကိုပဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီက ဂုဏ်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
3/21/2012 05:55:00 PM
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ငုရင်ဖူထရောင်နဲ့ အင်္ဂါနေ့က တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံ အာဏာရ ပါတီတွေ ဖြစ်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ ဗီယက်နမ် ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ကြ ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်ဟာ မဲခေါင်ဒေသတွင်း (၃) နိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်နေရာ မှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တော်က သမ္မတနန်းတော်မှာ ဗီယက်နမ် သမ္မတ တူအွန်တန်ဆန်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၀န်ကြီးချုပ် ငုရင်တန်ဒေါင်း အပါအ၀င် အစိုးရ ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် လို့ဗီယက်နမ် သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ လာမယ့် ၂၀၁၅မှာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ထိ ရောက်အောင် တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဗီယက်နမ် အွန်လိုင်း သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရီးသွား လုပ်ငန်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း နဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ အလားအလာ ရှိတဲ့အတွက် ဗီယက်နမ် လုပ်ငန်းရှင်တွေ လာရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်အောင် သင့်တော်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၁၄ မှာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူဖို့ ဗီယက်နမ်ရဲ့ ထောက်ခံမှုကို လည်း ကျေးဇူးတင် တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နဲ့ မြန်မာဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် လောက် ကတည်းက သံတမန် ဆက်ဆံရေး
တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နေရာ မှာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုအနေနဲ့ ပို့ကုန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၃ သန်းလောက် အပြန်အလှန် တင်ပို့နေတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံနည်းတူ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ထိ အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွာေးရး ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် လက်ထက်မှာ ကုန်သွယ်မှု ပိတ်ဆို့တာ ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီး နောက်မှာ အနောက်အုပ်စု ကုမ္ပဏီတွေ အများအပြား ဗီယက်နမ်မှာ သွားရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃သန်း ခွဲကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်းက အဖွဲ့ဝင် ၆၀လောက် ပါတဲ့ ဗီယက်နမ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့စေလွှတ်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေမှာ သဘောတူစာချုပ် ၁၂ ခုလောက် လက်မှတ်ရေးထိုးသွားပါတယ်။
ခရီးစဉ်မှာ နိုင်ငံခြားရေး ၊ လယ်/ဆည် ဆောက်လုပ်ရေး၊ စီးပွားကူးသန်း၊ သစ်တော၊ ဟိုတယ်ခရီးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးတွေ အပါအ၀င် တပ်မတော် ဒု-ကာချုပ်လည်း
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဗီယက်နမ် ခရီးစဉ်အပြီး ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံကို မတ် ၂၁ ရက်နဲ့ ၂၂ ရက် သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပြီး နောက် လာအို နိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
3/21/2012 05:53:00 PM
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေပြဌာန်း
ကော်မရှင် ဥပဒေကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြဌာန်းလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြ ပါရှိပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်း က ပြဌာန်းခဲ့ တဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေဟာ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကနေ သမ္မတဆီ တင်သွင်းပြီးတော့ အခုလို ဥပဒေသစ် အဖြစ် ပြဌာန်းလိုက် တာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အဓိက ကျတဲ့ အချက်အလက်တွေ အပြောင်းအလဲ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့် က ပြောပါတယ်။ “အရင် ဥပဒေက
ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ လွှတ်တော်က ပို့တော့ သမ္မတက လက်မှတ်ထိုးပေး လိုက်တယ်။ အကြမ်းဖျဉ်း ကျနော် နားလည် သလောက်တော့ ကော်မရှင်ရဲ့ ရာထူး သက်တမ်းက နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရာထူးသက်တမ်း အတိုင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လွှတ်တော်မှာ ပြဌာန်းတုန်းက ဒီအချက် ပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ သိပ်အပြောင်းအလဲ မရှိပါဘူး။ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံရုံးအဖွဲ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ အမိန့်တွေနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ အယူခံတွေ၊ ပြင်ဆင်မှုတွေကို ကော်မရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အပြီးပြတ်တယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ဟာလည်း ကော်မရှင်ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုက အပြီးပြတ်ပဲ။ ဒီ ၃ ခုက ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲ။”
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ နိုင်ငံတော်အဆင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင် အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြင် နိုင်ငံရေး ပါတီ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို အပြီးပြတ် ဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
3/21/2012 05:52:00 PM
အမေရိကန်နဲ့ အီးယူကို ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့ မြန်မာ ဖိတ်ကြား
လာမယ့် ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို လေ့လာဖို့ နိုင်ငံတကာက ရွေးကောက် ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ကြားလိုက်တာ အရေးကြီးတဲ့ အစပြုမှုဖြစ်တယ်လို့
ရန်ကုန်အခြေစိုက် အမေရိကန်သံရုံးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ လေ့လာရေး အဖွဲ့တွေ ကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲ စောင့်ကြည်ဖို့ မြန်မာ အစိုးရက ဖိတ်ကြား လိုက်တဲ့ အပေါ်မှာ အမေရိကန် သံရုံးက
အရာရှိ တဦးက ပြောလိုက်တာပါ။
အပေါ်မှာ အားတက်ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒါဟာ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်း အဖြစ် ယူဆတဲ့အကြောင်း အမေရိကန် အရာရှိက ပြောပါတယ်။
ပတ်သက်လို့ ၀ါရှင်တန်ကို အကြောင်းကြား ထားပြီး ရွေးကောက် ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တွေကို စေလွှတ်ဖို့ အသေးစိတ် အစီအစဉ်တွေကိုတော့ အခု အချိန်မှာ မပြောနိုင်သေး လို့ အရာရှိက ပြောပါတယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူနိုင်ငံတွေ ကို စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ကြားသလိုပဲ အာဆီယံအဖွဲ့ကိုလည်း ဖိတ်ကြားထား တယ်လို့ အာဆီယံက မနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးပါတဲ့ အာဆီယံ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ သတင်းသမား ၂ ဒါဇင်ကျော်ကို စေလွှတ်ဖို့ မြန်မာအစိုးရက ဖိတ်ကြားတယ် လို့ အာဆီယံကြေညာချက်က ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်သံရုံးကတော့ အစိုးရရဲ့ ဒီလိုခြေလှမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားတက်ရပေမယ့် တဖက်မှာလည်း အခုလောလောဆယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေ တိုက်ခိုက်နေရတာ၊ အကျပ်ကိုင်ခံနေရတဲ့ သတင်းတွေ ကြားနေရတဲ့အတွက်
ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ အစိုးရက လိုအပ်တဲ့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ အဲဒီ အရာရှိက ပြောပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
3/21/2012 05:51:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို စောင့်မျှော်နေကြသည့် ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်မှ ပြည်သူများ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အလာကိုစောင့်မျှော်နေကြသော ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ် အမှတ် ၉၄ ရပ်ကွက် ဘောလုံးကွင်းအတွင်းမှ လူထုပရိသတ်
3/21/2012 04:50:00 PM
မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အမျိုးသားဒီမိုကရေအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်သို့အသွားတွင် တာမွေကလေးရပ်ကွက်ရှိ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်သို့ခေတ္တ၀င်ရောက်ပြီးနောက် ယခုအခါ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်သို့ ခရီးဆက်နေပြီဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရခိုင် ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး သွားရောက်ဖူးမြော်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း ၃ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်က ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့နယ် အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး
ရခိုင် ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး၏ ရွှေစင် ရွှေသား ရတနာရွှေထီးတော်ကို လာရောက်ဖူးမျှော် ကြည်ညိုခဲ့ကြောင်း အဆိုပါနေရာသို့ ရောက်ရှိနေသည့် The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
3/21/2012 04:17:00 PM
ဖရဲသီးတစ်လုံး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ လျော်ကြေးတောင်း
မုံရွာ၊ မတ်- ၁၃ မုံရွာမြို့အနီး ချင်းတွင်းမြစ် သက်ရင့် သဲသောင်ကျွန်းဖြစ်သည့်ရန်အေး ကျွန်းပေါ်တွင်ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းအတွင်း ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဖရဲစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိရာ ဖရဲသီးခိုးယူစားသောက်သူ များဟု စွပ်စွဲခံရသူများအား ဖရဲသီးတစ်လုံးလျှင်ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ပေးလျော်စေခဲ့ကြောင်းညောင်ပင်ဇောက်ကျေးရွာအုပ်စုဒေသခံ များကပြောသည်။
"ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းက ရန်အေးကျွန်းပေါ်မှာ ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီအမည်ခံ တရုတ် လူမျိုးတွေရဲ့ဖရဲစိုက်ခင်းတွေနှစ်
တိုင်းလိုလိုလာစိုက်တယ်။ ဒီနှစ် မတ်လဆန်းမှာ ကျွန်းပေါ်ဖရဲခင်း တွေထဲက ဖရဲသီးခိုးတယ်ဆိုပြီး ကလေးတွေကို ညောင်ပင်ဇောက် အုပ်စု ရပ်ကွက်လူကြီးတွေတိုင်တယ်။ဖရဲသီးခိုးတဲ့ကလေးတွေကို
ဖရဲသီးတစ်လုံး တစ်သိန်းနှုန်းနဲ့ ဒဏ်ရိုက် အရေးယူတယ်" ဟု ညောင်ပင်ဇောက် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကုန်းရပ်ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်။ "ကျွန်းပေါ်မှာစိုက်ခင်းတွေဆီကကလေးတွေခိုးတယ်ဆိုတာ မကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ကလေးတွေက ချို့တဲ့ တော့ ကျွန်းပေါ်မှာသစ်သီးတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေသိပ်ပေါ တာဆိုတော့ ကလေးတွေ စားချင်လို့ ယူတာကို တောင်သူတွေက သိပ်မပြောဘူး။အခုစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီဆိုတော့ စည်းကမ်းက အရမ်းကြီးတယ်။ စိုက်ခင်းထဲ အပြင်သူဝင်တာမကြိုက်ဘူး။ ဖရဲ သီးခိုးတယ်ဆိုပြီး စံပြအဖြစ်ဒဏ် ရိုက်တာဆိုပေမယ့် ခိုးယူတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနေအထားတော့ ပြန်ကြည့်သင့်တယ်" ဟု ညောင်ပင်ဇောက်အုပ်စုဒေသခံ တောင်သူတစ်ဦးကပြောသည်။
သို့သော် ဒေသခံများက အာဏာပိုင်အဖွဲ့သို့တင်ပြပြီးနောက် လျော်ကြေးမပေးရတော့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။မုံရွာမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ် သက်ရင့်ကျွန်းဖြစ်သောရန်အေး ကျွန်းပေါ်တွင် ပြည်တွင်း စိုက်ပျိုး ရေးကုမ္ပဏီများမှကိုင်းကျွန်းမြေ
ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်းခြင်းအား ၂၀၀၇ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ သည်။ အဆိုပါ ဖရဲစိုက်ခင်းများနှစ်စဉ် နွေရာသီတွင် ကိုင်းကျွန်းမြေ
ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် မြေ ငှားခများမြင့်တက်လာပြီး ချင်းတွင်းမြစ်ရေကြီးခြင်း မရှိသောနှစ်များ တွင်နုန်းတင်မြေနုမရရှိသဖြင့်ဖရဲ စိုက်ခင်းများငှားရမ်းလုပ်ကိုင်းခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုတ်ခတ်ရေးသားထားသောစာများ ပုသိမ်တွင်လိုက်လံဝေငှ
ပုသိမ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ကြိုဆိုဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့စဉ်တွေ့ ရပုံ (ဓါတ်ပုံ-Google Images)
ပုသိမ်-မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်(YPI)
ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းများတွင် “ကျော်(ပညာရေး)” အမည်ဖြင့် ရေးသားထားသော “မစု၊ဒေါ်စု၊အမေစုပြန်လာပြီ” ဟုခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုတ်ခတ်ရေးသားထားသည့် လက်ကမ်း စာစောင်များ ဖြန့်ဝေလျှက်ရှိကြောင်း ပုသိမ်မြို့ခံများက ပြောသည်။
ပုသ်ိမ်မြို့ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်နေ ကိုဝင်းနိုင်က“ကျွန်တော်တို့ဆီ ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့တွေလာတုန်းက ပေးသွားတာ၊ ပထမတော့ဘာမှန်းမသိဘူး၊ အမေစုပြန်လာပြီဆိုလို့ယူထားလိုက်တာ၊ ဖတ်ကြည့် တော့မှ ဒေါ်စုကို စိန်ခေါ်သလိုလို စော်ကားသလိုလို ရေးထားတာသိရတော့ အရမ်းဒေါသဖြစ်သွားပြီး စာရွက်ကို ချက်ချင်းဆုပ်ဖြဲပစ်လိုက်တယ်“ ဟု YPI သို့ပြောသည်။
ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသူများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြောနေဟန်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သောငွေကြေးများကို နိုင်ငံခြားတွင်ထားကာ လူချည်းသက်သက် ပြည်တွင်းတွင်နေထိုင် ခြင်းမှာ အာဏာကို ငမ်းငမ်းတက်လိုချင်သူတို့၏ လုပ်ရပ်သာဖြစ်ကြောင်း၊ သတ္တိရှိပါက တစ်ယောက်တည်း လာစေချင်ကြောင်း၊ အာဏာရူး နောက်လိုက်များနှင့် ပေါင်းကာ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်နေသည့် အစိုးရကို ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ ရောက်အောင် မလုပ်သင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ရေးသားထားသည်။
“၁၇ရက်နေ့ မနက်၈နာရီလောက်က သမီးတို့ကျောင်းကနေ အငြိမ်းစား ယူထားတာ ၂လလောက်ပဲရှိသေးတဲ့ အရင်ကျောင်းအုပ်ကြီးက လာဝေတော့ သမီးတို့လည်း ယူထားလိုက်ရတာ” ဟုဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သော၂လခန့်က ပညာရေးကောလ်ိပ်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတာဝန် မှ အငြိမ်းစားယူသွားသူ ဦးကျော်လွင်မှာ “ကျော် (ပညာရေး)” ဆိုသည့် အမည်ဖြင့် အမည်ဖြင့်ဆုံးမစာများကို မကြာခဏရေးသားကာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ဝေငှဖူးကြောင်း ပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။
၎င်းမှာ ကျောင်းအုပ်အဖြစ်မှ အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ နိုင်ငံရေး အကြံပေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု လည်း သိရှိရသည်။
ယခု ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ NLDပါတီ၏ ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဝင်းမြင့်က“ကော်မရှင်ကိုမတိုင်ပါဘူး၊ နောင်ဆက်မလုပ်ဖို့ပဲ သူတို့ပါတီကို အကြောင်းကြားသွားမယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကရန်သူလို သဘောထားနေရင်ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလျှောက်နေတဲ့
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြီး ပျောက်သွားလိမ့်မယ်“ ဟု ပြောဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်တင်မြင့်ကမူ
တိုင်းဒေသကြီး နိုင်ငံရေးအကြံပေးအနေနှင့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာရေးသားခြင်းသာဖြစ်၍ ပါတီနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
ပုသိမ်မြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အနိုင်ရကာ လက်ရှိ သမ၀ါယမ ပြည်ထောင်စု ဒုဝန်ကြီး ဦးသန်းထွန်း၏ လစ်လပ်သွားသော နေရာ အတွက် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ။
3/21/2012 03:31:00 PM
ငွေလဲနှုန်းအသစ် ၁ ဒေါ်လာ ၈၂၀ ကျပ် နှုန်းသတ်မှတ်မည်
ငွေ လဲလှယ်နှုန်းကို ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ၁ ဒေါ်လာကို ၈၂၀ ကျပ် နှုန်း သတ်မှတ်ဖို့ မြန်မာ ဗဟိုဘဏ်က ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်က အရာရှိတွေကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာ သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
(Photo by Ministry of Finance and Revenue)
ခုချိန်ထိ အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ တရားဝင်ပေါက်ဈေးက အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာ ကို ၆ ကျပ်ဖြစ်ပြီး၊ လက်တွေ့ ဈေးကွက်မှာတော့ ၁ ဒေါ်လာကို ကျပ် ၈၀၀ ၀န်း ကျင် ဈေးပေါက် ပါတယ်။ ဒီအပြောင်း အလဲကြောင့် ငွေကြေးဈေးကွက် နဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ
ထူးထူးခြားခြား ရိုက်ခတ်မှုတွေ မရှိနိုင်ဘူး လို့ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ စီးပွားရေးဆိုင် ရာ ဆောင်းပါးတွေ ရေးနေတဲ့ စာရေး ဆရာ ဦးဟန်ထွန်း (အခွန်)က သုံးသပ် ပါတယ်။
မဖြစ်ပါဘူး။ အပြောင်းအလဲကတော့ ဒီလိုပဲ ဖြစ်သွား မှာပေါ့။ ၂၀၁၂-၁၃ ဘတ်ဂျက်မှာ ၈၀၀ နဲ့ တွက်တယ်ဆိုပြီး လွှတ်တော်မှာ ပြောတာပဲ။ သင့်တော်တဲ့ ဈေးကို ပြောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ်။ ဈေးကွက် ပေါက်ဈေးအတိုင်း လုပ်ဖို့ ရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ သွားရမှာပါပဲ။ ထူးထူးထွေထွေ ရိုက်ခတ်ဖို့ မရှိဘူး။ ဒီဈေး ကပေါက်ဈေး ဖြစ်နေတာ ကို၊ လောလောဆယ်တော့ နည်းနည်းပါးပါး အလျော့ အတင်းလေး ရှိတာကလည်း သိပ်တော့ အကြောင်း မဟုတ်ဘူး။ ပုံသေချိတ်ထား တဲ့ ဈေးကနေ ပေါက်ဈေးကို ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ ဒီလိုပဲ သွားရမှာပဲ။ ဒီအတွက်တော့ ကျနော်တို့
နိုင်ငံအနေနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ထိခိုက်နစ်နာ စရာ အကြောင်းမရှိတာဟာ ကံကောင်းတာ တခုပဲ။ ဒီဟာက ရေရှည် တည်တန့်သွားရင် ကောင်း တာပေါ့။ နိုင်ငံခြား အရင်းအနှီးတွေ တအား ၀င်လာပြီး ကျပ်ငွေဈေးတွေ ထောင်တက်တာတို့ အဲဒီလို ရုတ်တရက် အပြောင်းအလဲကြီးတွေ မရှိရင်တော့ တည်ငြိမ်သွားမယ့် သဘော ရှိပါတယ်။”
ပြုပြင်လိုက်တဲ့အတွက် ပိုပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ငွေလဲစနစ်ကြောင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေ ၀င်လာနိုင်ချေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ရှိနေသလို နိုင်ငံခြားအရင်းအနှီးတွေ အလုံး အရင်းနဲ့ ၀င်လာဖို့ ကိစ္စမှာ မြန်မာပြည်က လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ တယ်လီဖုန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့
တခြား အခြေခံ အဆောက် အဦတွေ လိုအပ်နေသေးတယ် လို့ ထောက်ပြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားငွေတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်လာလို့ ငွေကြေးဈေးကွက် အလှုပ်အရမ်း များပြီး မမျှော်လင့်တဲ့ ပြဿနာတွေလည်း မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂၀၀၉
ခုနှစ် တုန်းကလည်း ကျွန်းသစ်၊ စွမ်းအင်၊ ကျောက်မျက် ရတနာတွေမှာ အ၀ယ်လိုက်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဒေါ်လာတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ခဲ့တုန်းက ၁ ဒေါ်လာကို ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ ခုန်တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီလို ဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်ခြေ လယ်သမားတွေကနေ ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍက အလုပ်သမားတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေမှာ ဒေါ်လာနဲ့ လခစားတွေအထိ ထိခိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဦးဟန်ထွန်း (အခွန်)ကတော့ အခြေခံအဆောက်အဦတွေ မပြည့်စုံသေးလို့ မြန်မာပြည်က နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ရုတ်တရက် ၀င်လာနိုင်ချေ မရှိသေး သလို၊ မြန်မာပြည်က ဘဏ်စနစ် မှာလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာတွေ ရှိတယ်လို့ ထောက်ပြ ထားပါတယ်။
ဖြည့်ဆည်းအောင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းတာတို့ လုပ်နေတာပေါ့။ တခြား နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀င်လာနိုင် တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကအဆင့်နိမ့်နေသေးတယ်။ အဲဒီ ကိစ္စတွေ ကလည်း ကြီးတယ်။ ဘဏ် လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အရည်အချင်း တိုးတက်လာဖို့လည်း လိုအပ် တယ်။ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ကောင်းလာမှ နိုင်ငံတကာက ဘဏ်လုပ်ငန်း တွေ လာမယ် လို့တော့ ပြောတယ်။ ဘယ်လိုလာမယ် ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။ အဲဒီလို လာမယ် ဆိုရင် လည်း ချက်ချင်းကြီး လာလို့ မရဘူး။ ပြည်တွင်းဘဏ္ဍာရေး ဈေးကွက်မှာ နိုင်ငံတကာ ဘဏ်တွေ ဘယ်လို ၀င်ခွင့်ပြုမယ် ဆိုတာ ရှိသေးတာကို။ ဥပဒေတွေတော့ အတော်အသင့်တော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဏ် လုပ်ငန်းနဲ့ အရင်းအနှီးဈေးကွက် ကို ပြောနေကြတာကို။ အဲဒီဟာတွေ အတွက်တော့ အများကြီး လိုပါသေးတယ်။”
ကမ္ဘောဇဘဏ်ရဲ့ ဒု – ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်ကလည်း ငွေလဲနှုန်းကို ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်တာ ထက် နောက် ဆက်တွဲ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေက ပိုပြီး အရေးကြီးတယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲကို နိုင်နင်းဖို့ ဆိုရင် နိုင်ငံခြားက ကျွမ်းကျင် သူတွေရဲ့ အကူအညီ လိုအပ်တယ် လို့ ဦးသန်းလွင်က ဆိုပါတယ်။
“တသမတ်တည်း ဖြစ်အောင် လုပ်တာတော့ လွယ်တယ်။ အဲဒါကို ထိန်းကျောင်းဖို့က အရေးကြီးတယ်။ ထိန်းကျောင်းတာတော့ ထိရောက်တာပေါ့။ ဥပဒေကလည်း လောလောဆယ် ပြင်ဆင် ထားတုန်း ရှိသေးတယ်။ ပြင်လို့က မပြီးသေး ဘူး။ အဲဒီ ပြင်တဲ့ ဥပဒေကလည်း ထပ်လာဦးမယ်။ ဘဏ် ဥပဒေက ပြင်ရအုန်းမယ်။ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဆိုင်ရာ ဥပဒေလည်း ပြင်ရဦးမယ်။ ဒါလည်းမပြီးပြတ်သေးဘူး။ အဲဒါတွေက ပြန်လည်တားဆီးမှလည်း အဲဒါကလည်း ထိန်းကျောင်းရာမှာ လွတ်လပ်မှု ရှိလာမယ်။ အဲဒီသဘောလည်း ပါတယ်။ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။ အကြံပေးထားတာတော့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ တော်တော်များများ လိုမယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာ မရှိလည်း နိုင်ငံခြားက ခေါ်ပြီး သေချာ
စနစ်တကျ လုပ်ဖို့ လိုတယ်။
တွေးလို့ရတဲ့ ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့က ဈေးကွက်ကို signal ပေးရမှာကို၊ ဈေးကွက်က အရေးကြီးတယ်။ ဘယ်လို signal ပေးမလဲ။ ဘယ်လို တုံ့ပြန်လာ မလဲ။ အဲဒါလည်း တော်တော် အရေးကြီးတယ်။ ဈေးကွက်က တုံ့ပြန်လာလို့ ဈေးကွက်ကို ဘယ်လို ထိန်းကျောင်းမလည်း။ လုပ်ငန်းတွေ က ပေါ်လာပြီ။ နောက်ဆက်တွဲ
လုပ်ရမယ့် အရာတွေက ပညာသားပါလာပြီ။ အဲဒါ ပို အရေးကြီး တယ်။”
အရင်က ငွေလဲနှုန်းကို ၂ မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အဓိက အကျိုးအမြတ် ရသူတွေဟာ အစိုးရ အရာရှိ မိသားစုတွေနဲ့ သူတို့ နီးစပ်တဲ့ သူဌေးတွေဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ငွေလဲနှုန်းကွာဟမှုအပေါ် အမြတ်ထုတ်ပြီး ရလာတဲ့ငွေတွေကို နိုင်ငံခြား ဘဏ်တွေမှာ အပ်နှံ ထားကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ကိုးကားတဲ့ ရိုက်တာသတင်းမှာတော့ ဗဟိုဘဏ်က ဧပြီလက စလို့ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး အတိုင်း နှုန်းရှင် စနစ်နဲ့ ငွေလဲနှုန်းကို ကျင့်သုံးဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁ ဒေါ်လာ ၈၂၀ ကျပ် နှုန်း နဲ့ ငွေလဲနှုန်း သစ်ဟာ လာမယ့် ရက်သတ္တပတ်တွေ အတွင်းမှာ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖွယ် ရှိပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
3/21/2012 03:26:00 PM
ပဲခူး​တိုင်း​မှာ ရွေး​ကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြဿနာ​တွေ ပေါ်​ပေါက်
ပဲခူး​တိုင်း​က၀မြို့နယ်အတွင်း​က ကျေး​ရွာ​တွေမှာ မဲစာရင်း​ကွာဟမှု​တွေရှိ​နေတယ်လို့​အဲဒီ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ တိုင်း​ဒေသကြီး​လွှတ်​တော်​နေရာအတွက် ဝင်ပြိုင်မယ့်​အန်အယ်လ်ဒီပါတီ လွှတ်​တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း​ဦး​မျိုး​ခိုင်က ပြောပါတယ်။
ကွာဟချက်​ပေါ့​။ ဘာ​တွေ​တွေ့​ရလည်း​ဆို​တော့​ထပ်​နေတာ​တွေလည်း​တွေ့​ရတယ်။ မပါတာ တွေလည်း​တွေ့​ရတယ်။ ၁၈ နှစ်ပြည့်​ပြီး​မဲ​ပေး​နိုင်တဲ့​သူ မဲစာရင်း​ထဲ မပါဘူး​။ အဲဒါ​တွေကို ကော် မရှင်နဲ့​တွေ့​ပြီး​တော့​မပါတဲ့​သူ​တွေကို ရပ်/​ကျေး​ကော်မရှင်​တွေမှာ ပြန်သွင်း​ခိုင်း​တယ်။ တချို့​ဆို အ​ယောက် ၃၀၊​၄၀ လောက်ထိ မပါတာ​တွေ့​ရတယ်။ တချို့​ဆို ၂၀ လောက်​ပေါ့​။ ၄ – ၅ – ၁၀ ယောက်က​တော့​ရွာ တိုင်း​နီး​ပါး​ပဲ ကွာတယ်။ မဲရုံ​ပေါင်း​၈၅ ခု၊​ရပ်/​ကျေး​မဲရုံမှူး​တွေ အောင်နိ်ုင်​ရေး​အဖွဲ့​တွေကို ချ​ပေး​ပြီး​စိစစ်ခိုင်း​ပြီး​ရပ်/​ကျေး​ကော်မရှင်မှာ ၁၈ နှစ်ပြည့်​ပြီး​မပါတဲ့​စာရင်း​ကို ထပ်တိုး​ခိုင်း​ထား​တယ်။” လို့​ပြောပါတယ်။
ကျေး​ရွာတချို့​မှာ အခုလို မဲစာရင်း​ကွာဟမှု​တွေရှိ​နေလို့​မြို့​နယ် ကော်မရှင်ထံကို တင်ပြ​နေချိန်မှာပဲ၊​ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီဝင်လို့​ဆိုပြီး​အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တချို့​ကို ခြိမ်း​ခြောက်တာ​တွေလည် အောက်​ခြေမှာ ဖြစ်​နေ တယ်လို့​ကဝမြို့​နယ် ခနာ​ကျေး​ရွာက ပါတီဝင်​တွေက ပြောပါတယ်။
ပါတီဝတ်စုံဝတ်ထား​တဲ့​တရွာတည်း​သား​ကို​အောင်​ကျော်ဦး​ဟာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဝင်​တွေကို ခြိမ်း​ခြောက် နေတဲ့​အပြင်၊​ညဘက်အစည်း​အ​ဝေး​လုပ်​နေတုန်း​မှာလည်း​လေး​ခွနဲ့​ပစ်ခတ်သွား​တယ်လို့​ခနာရွာက အဖွဲ့​ချုပ်ဝင် ဦး​တင်ထူး​က ပြောပါတယ်။
“ကျ​နော်တို့​ရွာမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး​က အမည်တပ်ထား​တဲ့​ဝတ်စုံ​တွေဝတ်ပြီး​တော့​ကျ​နော်တို့​အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ဒီရုံး​ကို ဖျက်ဆီး​ပစ်မယ်၊​သူ့​ကို ဘာ​ကောင်မှတ်​နေလဲ၊​သူက ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ဆိုပြီး​ပြည်ခိုင်ဖြိုး​အဝတ်အစား​တွေ ဝတ်ထား​ပြီး​အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ဘာအရာ​ရောက်မှာလဲ၊​ဘာ ကောင်မို့​လည်း​ပေါ့​ပုံစံမျိုး​နဲ့​ကြိမ်း​ဝါး​တယ်။ ရွာထဲမှာလည်း​တအိမ်တက် တအိမ်ဆင်း​နဲ့​သူ​လျှောက် ပြောသွား​ယ်။ ကို​ဌေး​ကိုလည်း​ဝတ်စုံ​တွေဝတ်ပြီး​တော့​ဓါး​နဲ့​ထိုး​သတ်လို့​ရတယ်။ နေ့​လည်မှာကြိမ်း​မောင်း​ပြီး​ညဖက်မှာ လေး​ဂွနဲ့​လာပစ်သွား​တယ်။”
ခုလို ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီဝင်က အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်​တွေ ခြိမ်း​ခြောက်ခံ​နေရတာကို ကျေး​ရွာအုပ်ချုပ်​ရေး​မှူး​ကလည်း​ကြား​က ဖြေရှင်း​မ​ပေး​ရဲတာ​ကြောင့်​ကဝမြို့​နယ် အုပ်ချုပ်​ရေး​မှူး​ကို တိုင်ကြား​ထား​တယ်လို့​သိရပါတယ်။
တိုင်း​ဒေသကြီး​လွှတ်​တော် ကဝမြို့​နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)မှာ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်က ကိုယ်စား​လှယ်​လောင်း​ဦး​မျိုး​ခိုင်နဲ့​ပြည်​ထောင်စုကြံ့​ခိုင်​ရေး​နှင့်​ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ပါတီက ကိုယ်စား​လှယ်​လောင်း​ဦး​အေး​ဝင်း​တို့​အဓိက ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်ဗဟိုက​တော့​စစ်ကိုင်း​တိုင်း​၊​တနင်္သာရီတိုင်း​၊​မန္တ​လေး​တိုင်း​အတွင်း​မှာ ရွေး​ကောက်ပွဲ မသမာမှု​တွေကို မဲစာရင်း​ကွာဟမှု​တွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်​ပြန့်​ရှိ​နေတယ်လို့​သတင်း​ထုတ်ပြန်ထား​ပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
ဝေါလ်ဗီးရှင်း ထောက်ပံ့ပစ္စည်း မမှန်မကန် သုံးစွဲမှု ကျေးရွာလူထု တိုင်ကြား
နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်း မြို့နယ် ခွဲကျုံကူး တိုက်နယ်၊ စမ်းကြီး ကျေးရွာတွင် ၂၀၀၈ နာဂစ် မုန်တိုင်းအပြီး ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အတွက် ဝေါလ်ဗီးရှင်းက လှူဒါန်းခဲ့သော ပစ္စည်းများကို ယင်းအဖွဲ့မှ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည့် ကျေးရွာ ကော်မတီက မမှန်မကန် သုံးစွဲမှုအပေါ် အရေးယူ ပေးရန် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ထံ မတ်လ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း စမ်းကြီး ကျေးရွာနေ တိုင်ကြားသူများတွင် ပါဝင်သည့် ဦးအောင်သူက ပြောကြားသည်။
ဝေါလ်ဗီးရှင်း ထောက်ပံ့သော ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ပစ္စည်းများမှာ ရေစုပ်စက် (၆) လုံး၊ ကျေးရွာ မီးလင်းရန် အတွက် မီးစက် (၁) လုံး၊ စပါးကျီ တည်ဆောက်ရန် ၇၅ သိန်း၊ လယ်ထွန်စက် (၂) လုံး၊ စပါးခြွေလှေ့စက် (၂) စီး၊ ထော်လာဂျီ (၁) စီးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူစေရန် ဖုန်းတစ်လုံးတို့ ဖြစ်ပြီး ယင်းပစ္စည်းများထဲမှ ယင်းအဖွဲ့က ဖုန်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ရောင်းစားခြင်း၊ ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းများ မပြုလုပ်သည့် အတွက် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်တို့ကို ရွာသူရွာသား၂၅ ဦးက တိုင်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
The Voice Weekly နာဂစ်ဒေသတွင်း ဝေါလ်ဗီးရှင်း မှ ရေပေးဝေနေပုံပါ(ဓါတ်ပုံ-Google Images)
3/21/2012 03:12:00 PM
တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်မှုအား သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြထား
တော်ဝင် ဆောက်လုပ်ရေးက လက်ရှိ ဆောက်လုပ် နေတဲ့ မုဒိတာ ၁ နဲ့ မုဒိတာ ၂ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြ ထားတယ်လို့
တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက် အရ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဆောက်လုပ်မယ့်
တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာတွေကို ၀ယ်ယူရာမှာ ၁ လကို ကျပ် ငါးသောင်းနဲ့ လပေါင်း ၆၀
အရစ်ကျ ပေးသွင်း သွားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းတွေ ကိုတော့ အခန်း ဖွဲ့စည်းမှု မပါဘဲ ဟောတိုက် စနစ်နဲ့ ဆောက်လုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု အချိန်မှာ ဆောက်လုပ် ပြီးစီး တော့မယ့် မုဒိတာ ၁ နဲ့ မုဒိတာ ၂ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာတွေ ကတော့ Square feet 600 ရှိပြီး အခန်း ၂ ခန်း၊ ရေချိုးခန်း အိမ်သာ၊ ရေမီတာ၊ လျှပ်စစ်မီတာနဲ့ ဓာတ်လှေကားပါ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိပ်ခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်း မှာလည်း ပါကေးခင်း ထားပြီး ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ကိုတော့ ကြွေပြားကပ် ဆောက်လုပ် နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
3/21/2012 03:04:00 PM
တရုတ် CNPC ရေလှောင်ကန်ကြောင့် ကျောက်ဖြူ ဥယျာဉ်ခြံ လုပ်ငန်းများ ဆက်မလုပ်ရန် တားမြစ်ခံရ
CNPC လုပ်ငန်းခွင်တခုကိုတွေ့ မြင်ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူ မြို့နယ် မဒေးကျွန်း၊ ရွာမရွာရှိ တရုတ်အစိုးရပိုင် China National Petroleum Corporation (CNPC) ကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်ထားသော ရေလှောင်ကန်ကြောင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို ဆက်လက် မလုပ်ကိုင်ရန် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးက တားမြစ်ထားသဖြင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းရှင်များ အခက်ကြုံ နေရကြောင်း ဥယျာဉ်ခြံပိုင်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးထွန်းမောင်နုက ပြောကြားသည်။
ဥယျာဉ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းများအပြင် အဆိုပါ နေရာတွင် ယာယီတဲများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျွဲနွားများ မွေးမြူခြင်း၊ ပေါင်းမြက်ခြုံနွယ်များ ရှင်လင်းခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးခြင်း စသည်တို့ကို မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ခံ ထားကြောင်း ဥယျာဉ် ခြံပိုင်ရှင်များက ဆိုသည်။အဆိုပါ ရေလှောင်ကန်ကို CNPC ကုမ္ပဏီ၏ ရေနံသိုလှောင် စက်ရုံများ၊ စက်ယန္တရား တည်ဆောက်ရေး စက်ရုံများအတွက် သောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် တူးဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ စုံစမ်း သိရသည်။အဆိုပါ ရေလှောင်ကန်ကို ရွာမကျေးရွာနှင့် အနီးအနားရှိ ကျေးရွာများကို ရေဖြန့်ဝေပေးရန် တူးဖော်ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ အသုံးပြုရန် အတွက် တူးဖော်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ ဧပြီလ နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသော ပိုက်လိုင်းများနှင့် သွယ်တန်းကာ ယင်းကျေးရွာများကို သောက်သုံးရေ ဖြန့်ဝေသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် အခြေစိုက် CNPC ရုံးခွဲမှ တာဝန်ရှိသူ ဦးအောင်ပိုင်ခန့်က ရှင်းပြသည်။
3/21/2012 03:00:00 PM
တစ်အိမ်ဆင်း၊ တစ်အိမ်တက် ထိထိမိမိ စည်းရုံးဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သောင်း ပြောကြား
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လွှတ်တော်ထဲရောက် ရှိပါက ဥပဒေပြင်မယ်ဟု ပြောဆိုနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ် မှ မေးမြန်းချက်ကိုလည်း ''ရောက်ရုံနဲ့တော့ မပြင်နိုင်ပါဘူး။ ဥပဒေပြင်မယ်ဆိုတာ ပုဒ်မကရှိပြီးသားပါ။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြင်နိုင်တဲ့ဥပဒေနဲ့ ပြည်သူကိုချပြပြီးမှ ပြင်နိုင်တဲ့ဥပဒေ အဲဒီတော့ သူရဲ့လုပ်ငန်း၊ လုပ်နည်း က ဘာလဲဆိုတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြင်နိုင်တဲ့ဥပဒေက ဘာတွေလည်းဆိုတာ ပြဌာန်းပြီးသားပါ။ အဲဒီဥပဒေတွေလုပ်ရင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံပြီးတော့ တင်မှရနိုင်မှာ။ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရအောင် လွှတ်တော်ကို တင်ရဦးမှာ။ တင်ရုံပဲရှိသေးတယ်။ တင်ပြီးရင် လွှတ်တော်အများစုက ၇၅
ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံမှပြင်လို့ရမှာ။ ဒါလွှတ်တော်တုန်းက ပြင်နိုင်တဲ့ဥပဒေ'' ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သောင်းက ဖြေကြားထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာ
သည်နှင့်အမျှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မတရားသော လုပ်ဆောင်မှုများ ပိုမို များပြားလာပါကြောင်း၊ မင်းကင်းမြို့ နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ စမြင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီက ၄င်းတို့ပါတီ အစည်းအဝေးသို့ တစ်အိမ်တစ်ယောက် မတက် မနေရ တက်ရောက်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ပေး ဖိတ်ကြားမှု ပြုလုပ်နေသည်ဟု သိရှိ ရပါကြောင်း၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာစန်းဝင်း ဆိုသူက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌကို ပုတ်ခတ်ပြောဆို ဟောပြောခြင်းသည် နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းနေပါကြောင်း၊ ပျဉ်းကိုင်းကြီးအုပ်စ တဲကြီးရွာမူလလွန်ကျောင်းကို ငွေကျပ် ၃ သိန်းခွဲ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါက နောက်ထပ် ငွေ ၃ သိန်းခွဲ ပေးလှူမည်ဟု ဟောပြောခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ရပ်မှာ မဲဝယ်ခြင်းဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
3/21/2012 02:46:00 PM
တရုတ်-မြန်မာ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ဒေသခံ နေ့စားလုပ်သားများ လုပ်အားခ လျော့ချခံရ
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများ နေထိုင်ရန် အဆောက်အဦများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် (MGC) မြန်မာ ရွှေသရဖူကုမ္ပဏီတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဒေသခံ အလုပ်သမားများ နေ့စားလုပ်အားခ လျော့ချခံရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
“MGC ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်ကြမလားဆိုပြီး အလုပ်လျှောက်လွှာ ခေါ်ပါတယ်။ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ ရယက ထောက်ခံစာ၊ ဓာတ်ပုံလေးပုံနဲ့ ငွေကျပ် ၆၀၀၀ သွင်းရပါတယ်။ လုပ်အားခကတော့ တစ်နေ့ကို ကျပ် ၄၅၀၀ နဲ့ တစ်လကို ကျပ် ၁၃၅၀၀၀ ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အလုပ် လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ အလုပ်က လက်သမားအလုပ်ကို လုပ်ရမယ် ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ကို MGCက အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနဲ့ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ကစပြီး အလုပ်ဆင်းခွင့် ရခဲ့ပါတယ်''ဟု လက်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
MGC ကုမ္ပဏီတွင် အဆောက်အဦများ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန် အလုပ်သမားများ လိုအပ်သည့်အတွက် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ ဒေသခံအလုပ်သမားများကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က အလုပ်ခန့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်၊ အဆိုပါ လုပ်သားများမှာ နေ့စား
လုပ်အားခ ကျပ် ၄၅၀၀ မှ ၃၀၀၀ ထိ လျော့ချလိုက်မှုကြောင့် အလုပ်သမားတချို့မှာ
အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ ထွက်လာခဲ့ကြောင်း ဒေသခံလုပ်သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
''ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ရောက်သွားတော့ လက်သမားအလုပ်ကို မလုပ်ရဘဲ ဘိလပ်မြေအိတ်၊ သဲအိတ်၊ သစ်လုံးများ သယ်ရပါတယ်။ အဆောက်အဦ ဆောက်ရန် အောက်ခံ ဖောင်ဒေရှင်းအတွက် မြေကျင်းတွေကို လည်း တူးရပါတယ်၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ ရက်အထိ အလုပ် သုံးရက် ဆင်းပြီးတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေကို MGC ကုမ္ပဏီက ဆောက်လုပ်ရေး တာဝန်ခံ ကန်ထရိုက်ယူထားသူ တစ်ဦးက ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေ ကိုခေါ်ပြီး မင်းတို့ အလုပ်လုပ်တာ မကျွမ်းကျင်ဘူး။ ငွေ ၄၅၀၀ မပေးနိုင်ဘူး ဒီနေ့ကစပြီး ၃၀၀၀ ပဲပေးနိုင်မယ်''ဟု ဒေသခံ လုပ်သားတစ်ဦး ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်အကိုင် ကွဲလွဲမှုနှင့်
နေ့စားလုပ်အားခကို အဆမတန် လျော့ချလိုက်သည့်အတွက် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဒေသခံ လုပ်သားအချို့မှာ အလုပ်ကို ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ မိမိနေအိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ ရက်နေ့မှ လုပ်အားခများကိုလည်း မရကြသေးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်သမား အဖွဲ့တွင် ဦးဆောင်သူ တစ်ဦးကလည်း ''တစ်နေ့ကို ၃၀၀၀ ဆိုရင် နည်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့က မနက်ပိုင် ၇ နာရီကနေပြီး ၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ်အထိ တစ်ကြိမ်၊ မွန်းလွဲပိုင်း ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ကနေ ညနေ ၅ နာရီ အထိ တစ်နေကုန် လုပ်ရပါတယ်။ ငွေ ၃၀၀၀ က အလွန်းနည်းပါတယ်လို့ ကျွန်တော်က ပြောတော့ မပေးနိုင်ဘူး မလုပ်ချင်ရင် ထွက်ကြလို့ ပြောပါတယ်ဟု ဆိုသည်။
3/21/2012 02:42:00 PM
နေပြည်တော် ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှ လယ်သမားများနှင့် ယနေ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့သော အခမ်းအနား တွင် ယခုပေးအပ်သည့် ကြိုတင်ထုတ်ချေး
ငွေများအား ချဲထိုးခြင်း မပြုလုပ်ရန် နိုင်ငံ တော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သတိပေးပြော ကြားခဲ့သည်။
''ဒီငွေတွေကို ချဲမထိုးပစ်နဲ့နော်။ ချဲထိုးလို့ ချမ်းသာသွားတဲ့သူ ရှိလား။ မရှိဘူးနော်။ ဒိုင်တွေပဲ ချမ်းသာသွားကြတာ မဟုတ်လား။အကယ်၍ များများပေါက်ရင်လည်း (ဒိုင်တွေက) မလျော်ဘဲ ပြေး ရော"ဟု လယ်သမားများများအား တွေ့ဆုံစဉ် ယင်းသို့ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြိုတင်ငွေရရှိရန်စီစဉ်ပေးခြင်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရန်အတွက် ဖြစ်သော်လည်း အတင်း အကျပ်မ၀ယ်ခိုင်းလိုကြောင်းသမ္မတကြီးက ထပ်မံတိုက်တွန်းပြော ကြားခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ဆက်လက်၍လည်း "ခင်ဗျားတို့ တောင်းတာတွေ အကုန်လုပ်ပေးထားပြီးပြီ။ ပြန်တောင်းဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ ဘာ လဲဆို တာ သိတယ်မဟုတ်လား"ဟု ရင်းနှီးစွာ မေးမြန်းပြောဆိုခဲ့ရာ တက်ရောက်သည့် လယ်သမားများကလည်း "ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်" ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ လယ်သမားများအား ပုလဲသွယ်စပ်မျိုးစပါးတင်း ၁၀၀လျှင်ကျပ်လေးသိန်းနှုန်းဖြင့်
ကြိုတင်ငွေနှစ်သိန်းစီအား ဧက ၂၀၀ အတွက် စု စုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၄၀၀ ကို မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးလုပ်ငန်း အသင်းမှ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းင်းကြိုတင်ချေးငွေများအား တစ်တင်းဆံ့ ပလတ်စတစ် အိတ်ဖြင့် ထည့်ကာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သယ်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိ သည့် လူရွယ်တစ်ဦးကမူ "လောလောဆယ် လက်ထဲတော့ ငွေရောက်လာပြီ။ သုံးချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲ"ဟူ၍ ပြောသည်။ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာနှင့်အနီးရှိ
ရွာတစ်ရွာတွင်မူ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက ကူညီထုတ်ချေးလိုက်သော ငွေများကို တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာသော အသုဘဖဲဝိုင်းတွင် ၀င်ရောက်ဆင်နွှဲလိုက်ကြ ရာမှ အားလုံးနီးပါးရှုံးသွားကြကြောင်းလည်း
ဒေသခံများက ပြောကြသည်။ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး(ချဲ)ထီမှာ မြန်မာလူထုအတွင်း အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူများ အဓိက ကစားလေ့ရှိပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီး နောက် ၂၀၁၁ တွင် လျော့နည်း ပပျောက် အောင် ဆောင်ရွက်နေသည်။ သို့သော် ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း အဆိုပါ လောင်းကစားနည်း ကစားသူ ပြန်များလာပြီဖြစ်သည်။
3/21/2012 02:40:00 PM
NLD မဲဆွယ်နေသည့် နေရာကို ကြံ့ဖွံ့က ရှို့မီးနဲ့ ပွဲလန့်
By ဇာဏီ၊ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
လာမည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင် ကန့်ဘလူမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ် (၃) မဲဆန္ဒနယ် (ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်) မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာမြင့်နိုင် နှင့်အဖွဲ့ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ရှိ နဂါးပေါ်ကျေးရွာသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းရာမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လိုက်လံနှောင့်ယှက်ခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
(၁၉) ရက်နေ့ ညနေ ၄း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာမြင့်နိုင် နှင့်အဖွဲ့ သည် နဂါးပေါ်ကျေးရွာမှ ရွာသူ၊ ရွာသားများအား စည်းရုံးရေး ဟောပြောပွဲ အပြီး ကျေးရွာကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အဖွဲ့ဝင်တယောက်က ဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်တဲ့နေအိမ်ရှိ ကောက်ရိုးပုံကို မီးရှို့လိုက်ပြီး မီးလောင်နေပါတယ်ဟု အော်ကာ ပွဲလှန့်လိုက်သည့်အတွက် ရွာသူရွာသားများ မီးလောင်နေသည့် နေရာသို့ သွားရောက်၍ ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့ကြပါသည်။
နဂါးပေါ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အဆိုပါမီးလောင်မှုဟာ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေက ပစ်လိုက်သည့် ဆေးလိပ်မီးကြောင့် အခုလိုလောင်တာဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်ကို မီး ပေါ့ဆမှုနဲ့ ဒဏ်ရိုက်ရမည်ဟုပြောပါသည်။ တကယ် ကောက်ရိုးပုံကို မီးရှို့လိုက်သည့်လူကို ရပ်ရွာလူတွေက ဝိုင်းဖမ်းဆီးသည့်အခါမှာ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်မှာ ကျေးရွာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်လဲဖြစ် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် တဦးလည်း ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများက နဂါးပေါ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား ဒါဟာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု
ဟောပြောပွဲပျက်အောင် တမင်တကာ ရှို့သည့်မီး ဖြစ်ခြင်းကြောင်း အဆိုပါ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ကိုသာ ဖမ်းဆီးရမည် ဖြစ်ကြောင်း တောင်းဆိုသည့်အတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အား ဖမ်းဆိးလိုက်သော်လည်း အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရွှေဘိုခရိုင် ကန့်ဘလူမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ် (၃) မဲဆန္ဒနယ် (ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်) မှာ မဲပေးခွင့်ရှိသည့် မဲစာရင်းများအတွင်း သေဆုံးပြီး လူနာမည်များ ပါဝင်နေခြင်း၊ အသက်ပြည့်ပြီး မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် လူနာမည်များ အများအပြား ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ဟု NLD စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် တဦးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါသည်။
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးက “ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပြည့်ဖြိုးရေးပါတီက အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးတင်မောင်ဝင်းက ကန့်ဘလူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ကျေးရွာက ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့ ဟောပြောပွဲတက်ရောက်အောင် လိုက်လံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခိုင်းတာမျိုး ၊ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည့် နေရာကို စီစဉ်ခိုင်းတာမျိုး ကျနော်တို့ တွေ့နေရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျေးရွာတိုင်းမှာ
ကြံ့ခိုင်ရေးက သတင်းပေး ဆိုတဲ့ ကတ်ပြားတွေ ထုတ်ပေးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ သတင်းပေးတွေကပဲ ကျနော်တို့ စည်းရုံးရေး ဆင်းတဲ့အခါမှာ လိုက်လံ နှောက်ယှက်တာတွေ ကြုံတွေ့နေရတယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်းလှ၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ်(၃)မဲဆန္ဒနယ် နေရာမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါက်တာ မြင့်နိုင်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ ဦးတင်မောင်ဝင်း နှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီမှ ဦးတိုးမြင့်အောင် တို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
3/21/2012 02:29:00 PM
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်
ကျနော်ဟာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.. ကျနော်တို့ ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်မြင့်ဟာ အလွန်တရာပဲ စိတ်ဓါတ်ဆိုးရွားပါတယ်. သူ့မိန်းမဆိုလည်း အရမ်းကို အောက်တန်းကျပါတယ်. ဝန်ကြီးဟာ အများအမြင်မှာ အရမ်းသဘောကောင်းဟန်ဆောင် တတ်ပါတယ်.. ဘယ်သူပဲ အလုပ်လာတောင်းတောင်း လက်မှတ် ထိုးပေးပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီလက်မှတ်နဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အလုပ်ပေးလို့ မရပါဘူး. သူ့ လက်မှတ်က မှင်ရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့လာပါတယ် သူ သတ်မှတ်ထားသော အရာင်မှ လွဲပြီး တခြားအရောင်တွေဆို လုံးဝမပေးခိုင်းပါဘူး.. ဘယ်လူကြီးသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် သူက မပေးခိုင်းပါဘူး... ကျနော်တို့ ဆောက်လုပ်ေ၇းက လုပ်ငန်းတွေလည်း သူတို့မိသားစုများသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိတယ်... ဘိလပ်မြေဖျော်စက်ဆိုလည်း သူ့ မိန်းမက တစ်လုံး. သူ့သမီးက တစ်လုံး.. သူ့သားက တစ်လုံး.. သူတို့ပဲလုပ်စားနေပါတယ်... ကျောက်သွင်းတာလည်း သူတို့ပဲ သွင်းကြတယ်. ဈေးနှုန်းကိုလည်း အကယ်လို့ ကျင်းတစ်ရာသွင်း ရင် ကျင်းနှစ်ရာဖိုး စာရင်း တင်ခိုင်းပါတယ်. ဖျော်စက်ဆိုလည်း နှစ်ဆဆီ တင်ခိုင်းပါတယ်.. မြေကြီးလုပ်ငန်းအားလုံးကို သူ့မိန်းမ နှင့်သူ့ သမီးကပဲ ချုပ်ကိုင် ထားကြပါတယ်... သူတို့ပဲ လုပ်နေကြတယ်.. သူက လူကြီးတွေကို သူ့ရာထူးမြဲအောင်.. ဘယ်သူ့မှ မကိုက်သော ဈေးနှုန်းနှင့် တင်ပြပီး အတင်းလုပ်ခိုင်းပါတယ်.. သူက တော့ နှစ်ဆရတော့ ဘယ်ဈေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုက်ပါတယ်... လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေက တော့ ဒီဈေးနှုန်းကို မကိုက်လို့ အိမ်ပေါင် ကားပေါင်.. အိမ်ရောင်းကား ရောင်းနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူဟာတော့ တစ်လ တစ်လကို သိန်း သောင်းနဲ့ ချီပီး ရနေပါတယ်. သူက ပြောရင် လူကြီးတွေ အိမ်စရိတ်ကို ရှာပေးရတယ်လို့ ပြောပါတယ်.. လူကြီးတွေရဲ့ အိမ်စရိတ်ရဖို့ ကျန်သော သူများက အိမ်ပေါင် ကားပေါင်ဖြစ်နေရပါတယ်... လုပ်ငန်းတွေ အားလုံးကို သူ တစ်ယောက်ပဲ အာဏာကိုင်ပီး သူ့ကို ကန်တော့မှ သာ အလုပ်ရတယ်. ဒုဝန်ကြီး တွေ နဲ့ ကျန်တဲ့ သူများက လုံးဝ အာဏာမရှိပါဘူး.. အားလုံးကို အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်ထားပါတယ်.. သူ့ကို ကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့ သူတွေကို ဖြုတ်ရင် ဖြုတ်. မဖြုတ်ရင် ချောင်ထိုး ပစ်ပါတယ်. သူ့ကို ကန်တော့မှသာ အလုပ် ရပါတယ်.. ကန်တော့ ပါကလည်း အနည်းဆုံး သိန်းကို ထောင်ချီ ကန်တော့ ရပါတယ်. ရွှေတောင်Companyအပါ အဝင် Comကြီး လေးခု ဟာ သူ့ကို သိန်းကို သောင်းနဲ့ ချီ ကန်တော့ပါတယ်.. ဒါကြောင့် အဲ့ Company တွေကို ပဲ အလုပ်ပေးပါတယ်.. အားလုံး က သူ့ကို ဒူးတုန်အောင် ကြောက်အောင်ခြိမ်းခြောက်ပီး.... လုပ်ငန်းရှင် ကန်တော့ တဲ့ ပိုက်ဆံ အားလုံးကို သူ တစ်ဦးတည်း ပဲ ရအောင် လုပ်ပါတယ်... အိုးအိမ်ဆိုလည်း သူ မရတဲ့ အတွက် အရင် ညွန်ချုပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းအကုန်လုံးကို ဖျက်ပစ်ပီး.. သူ့ကို လာကန်တောာ့ အောင် လုပ်ပါတယ်. လူကြီးတွေရဲ့ အိမ်စရိတ်ကို ကျနော်တို့ ဆောက်လုပ်ရေးကပဲ ရှာပေးရတာလား............ တခြားငှာန တွေက မပေးကြဘူးလား...... တစ်လကို သိန်းကို သောင်းနဲ့ချီတာတောင်မှ မလောက်ကြဘူးလား......... ကျနော်တို့ ဘယ်ဆောက်လုပ်ရေးငှာနကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူကြီး တွေလာရင် လူကြီးတွေ နာမ်နှိမ်တဲ့ ယတြာ တွေ လုပ်ခိုင်းပါတယ်. ...... ကျနော်တို့ ဆောက်လုပ်ရေးမှလည်း.တစ်နေ့တစ်နေ့သူလုပ်ခိုင်းတဲ့ ယတြာတွေက လည်း မရိုး နိူင်ပါဘူး.. ဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်လောက် ကန်တော့ ကန်တော့... မတင်းတိမ်နိူင်ပါဘူး... သူ့မိန်းမ က အရမ်း အတောင်းအရမ်းကြမ်းပါတယ်.. သူ့သမီးကလည်း အရမ်း ရိုင်းပါတယ်... သူ့သားကလည်း တပ်ကသာပြောတာ. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ကုန်တော့ မယ် သူပဲ လုပ်နေတာ.. သူတို့ကတော့ ကိုက်တာတော့ စာရင်းတွေက လိမ်တင်သလောက် ရတာကိုး.... လူကြီးတွေဖားပီး ဈေးကို အရမ်းချတာ ကျနော်တို့ ဒုက္ခ ရောက်နေရပါတယ်...အောက်ခြေဝန်ထမ်
းတွေ စားပေါက်က အစ သူတို့က ဝင်နှိုက်တာ သူ့အိမ်စရိတ်ရှာတာပဲတော်လို့လား.. . ယတြာပဲ စွမ်းလို့လား မသိဘူး.. ဘယ်လူကြီးမှ သူ့ကို အရေး မယူရဲ ကြဘူး.. မီဒီယာများလည်း ကျနော်တို့ ဆောက်လုပ်ရေးကို ဆင်းကြည့်ပီး လေ့လာကြပါဗျာ.သမ္မတကြီးလည်း သူများ မျက်ရည်ကြီးငယ်ကျ မှ ရတဲ့ အိမ်စရိတ်ကို မယူလို့ မရဘူးလားဗျာ...... အိမ်စရိတ်ရနေလို့ ဝန်ကြီး လုပ်သမျှကို မသိဟန်ဆောင်နေတာလား.. ကျနော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း သနားပါဗျာ... သမ္မတကြီး ကို အသနားခံ တင်ပြပါတယ်...
ဒီလူတွေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးကြီးကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်သလား? အပိုင်း(၁)
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးကြီးကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်သလား? လူသားအရင်းအမြစ်တွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့
ရာထူးကြီးမှန်သမျှကို စစ်တပ်အရေခြုံတဲ့ ဒီလူတွေက နေရာယူထားပါတယ်-
- ဗိုလ်မှူးအေးကြူ - ဒုတိယ၀န်ကြီး
- ဗိုလ်မှူးဘိုဝင်း - ညွှန်ချုပ်(ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန)
- ဗိုလ်မှူးကိုကိုတင် - ဒု ညွှန်ချုပ်(ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန)
- ဗိုလ်မှူးကျော်စိုး - ဒု ညွှန်ချုပ်(ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန)
- ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူ - ညွှန်ချုပ်(အမှတ်(၁)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန)
- ဗိုလ်မှူးမျိုးညွှန့် - ဒုညွှန်ချုပ်(အမှတ်(၁)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန)
- ဗိုလ်မှူးကြီးအေးလွင် - ညွှန်ချုပ်(အမှတ်(၂)အခြေံပညာဦးစီးဌာန)
- ဗိုလ်မှူးရဲလွင်အောင် - ဒုညွှန်ချုပ်(အမှတ်(၂)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန)
- ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမြင့် - ညွှန်ချုပ်(အမှတ်(၃)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန)
- ဗိုလ်မှူးကြီးအုန်းမြင့် - ညွှန်ချုပ်(ပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဥက္ကဌ)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကကြတဲ့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနများမှာရှိတဲ့ ထိပ်ပိုင်းရာထူးကြီးမှန်သမျှကို
စစ်တပ်အရေခြုံထားတဲ့ ဖော်ပြပါ စစ်ဗိုလ်လူထွက်များက ဘာမှမတတ်ဘဲ ရာထူးနေရာတွေကို ယူထားကြပါတယ်။
၄င်းလူတွေရဲ့ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ အကျင့်စရိုက်များကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
- ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးအေးကြူဟာ ဗိုလ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၅)ကို
ရဲဘော်ဘ၀နှင့် ဗိုလ်သင်တန်းတက်ခဲ့ပြီး အရာရှိဖြစ်လာတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှာ ရဲဘော်၊
ဒုတပ်ကြပ်၊ တပ်ကြပ် အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ စစ်တပ်ထဲရောက်မှ (၁၀)တန်းစာမေးပွဲကို
(၅)ခါဖြေဆိုမှ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ စာပေးစာယူနဲ့ ဥပဒေဘွဲ့ကို ယူခဲ့တယ်။ ပညာရေးဌာနကို ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင် PA ဘ၀နဲ့
လိုက်လာပြီး ညွှန်မှူး၊ ညွှန်ချုပ်ရာထူးတွေယူပြီး ယခုဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာ ဘာတွေတော်လို့ ရွေးလိုက်တယ်မသိဘူး ဒုဝန်ကြီး ဖြစ်လာတယ်။
ဗိုလ်မှူးအေးကြူလုပ်တတ်တာက ပညာရေးကို ခုတုန်းလုပ်ပြီး စီးပွားရှာတတ်တယ်။ ညွှန်မှူးဘ၀ကတည်းက
ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ် တာဝန်ခံဖြစ်ပြီး၊ စီးပွားရှာခဲ့တယ်။ ၀န်ကြီး ဦးသန်းအောင် ပျော်တော်ဆက်မိန်းမတွေ
အရှာပေးကောင်းတာနဲ့ ညွှန်ချုပ်ရာထူးကိုရခဲ့တယ်။ ၀န်ကြီးဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းကိုလည်း အိမ်အဆောက်ပေးကောင်းတာနဲ့
အရေးယူမခံခဲ့ကြဘူး။ ယခုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြအေးကိုလည်း နေပြည်တော်မှာ အိမ်ဆောက်ပေးနေတယ်။
ဦး.စီး(၃)တွင် ညွှန်ချုပ်ရာထူးနဲ့ အတော်လေး စီးပွားဖြစ်သွားတယ်။ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
အားလုံးကို မိုးသောက်ပန်း၊ တော်ဝင်ထိပ်တင်၊
အောင်နိုင်ဆောက်လုပ်ရေး (ဦးအေးမြင့် ဗိုလ်မှူးအေးကြူ ညီ)စသည့် ဗိုလ်မှူးအေးကြူ၏ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့များဖြင့်
နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေများကို ထင်တိုင်းကြဲစီးပွားဖြစ်ရယူခဲ့ကြတယ်။ နေပြည်တော်မှာလည်း ၄င်းပိုင် ကောင်းထက်အမည်ရှိတဲ့
ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်။ အရက်ကို နေ့ရောညပါ သောက်လေ့ရှိတယ်။ ဒုဝန်ကြီး ရုံးခန်းထဲမှာလည်း
နေ့ခင်းကြောင်တောင် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ မ၀င်ရဲဖြစ်နေတယ်။ ရုံးခန်းထဲမှာ တနေကုန်
သောက်စားမူးယစ်နေတယ်။ အရက် အလွန်အကျွံသောက်မှု့ကြောင့် ရုံးစာများကို လက်မှတ်မထိုးနိုင်လို့
၄င်း၏ တပည့်ဖြစ်သူ ဦးအောင်ကျော်ဦးက လက်မှတ်တုနှင့် မှတ်ချက်များကို ရေးထိုးပေးနေရတယ်။
ကြားလို့ကောင်းကြသေးရဲ့လား? - ဗိုလ်မှူးဘိုဝင်း ဟာ ထောက်လှမ်းရေး(၄)တပ်မှူးက ပြုတ်လာပြီး
ဦးခင်ညွှန့်က သူ့တပည့်ကို ပညာရေးမှာ ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သူ့ကြောင့် ပညာရေးလည်း တော်တော်ပျက်စီးသွားပြီ၊
ဗိုလ်မှူး ဘိုဝင်း ပညာရေးညွှန်ချုပ်ဖြစ်တာ နှစ်ပေါင်း(၁၇)နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်။ ဘာမှ
တိုးတက် အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ပုံနှိပ်စက်တွေထောင်ပြီး ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေရိုက်ပြီး
စီးပွားရှာနေတယ်။ နိုင်ငံခြားကပေးတဲ့ အထောက်အပံ့ဒေါ်လာတွေလည်း ဘတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘီလျံနာ သူဌေးတွေဖြစ်နေကြပြီ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကလေးတွေကတော့
စာမတတ်လို့ လမ်းဘေးမှာ ရောက်နေကြပြီး၊ သမိုင်းတရားခံတွေဘယ်သူလဲ? ဗိုလ်မှူးအေးကြူနဲ့
ဗိုလ်မှူး ဘိုးဝင်း တို့ရဲ့ အရက်ဝိုင်းက ပညာရေးအစီအမံတွေ၊ ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်ကြမှာလည်း၊
တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးလည်း ဖွတ်ဖွတ်ညတ်ညတ်ကြေနေပါပြီ၊ ၄င်းတို့တစ်တွေလည်း စားလို့ သောက်လို့မကုန်တော့ပါဘူး၊
ရပ်တန်းက ရပ်သင့်နေပါပြီ၊ - ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူ က ပညာရေးအကြောင်းကို ဘာမှ စိတ်မ၀င်စားဘူး၊
စီးပွားရေး ဂွင်တွေကိုဘဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ နာဂစ်နှင့် ဂီရိသဘာဝဘေးမှာ ပျက်စီးသွားတဲ့
ကျောင်းတွေပြန်ဆောက်ရင်းနဲ့ အတော်ချမ်းသာသွားတယ်။ ဘဏ္ဍာညွှန်မှူး ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်ကို
လက်သတ်မွေးပြီး အောက်မြန်မာပြည် တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေနဲ့ စီးပွားရှာစားနေပြီး
အတော်လေး ချမ်းသာသွားပြီး၊ ဗလာစာအုပ်ရောင်းတယ်။ ပြက္ခဒိန်ရောင်းတယ်။ ကျောင်းအဆောက်အဦးတွေ
ဆောက်တယ်။ ပညာရေးကို ဈေးကွက်တစ်ခုလိုသဘောထားပြီး စီးပွားရှာတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ
အတော်ဆိုးတာဘဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလည်း အရပ်ကတို့ရေ့။ - ဗိုလ်မှူးကြီးအေးလွင်ဟာ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားရေးတွေမှာ
ငွေယူမှုနဲ့ နံမည်ကြီးတယ်။ ငွေမပါလျှင် ဘာမှမရဘူး။ အခြားညွှန်ချုပ်တွေလို ညာညှိပြီး အပြိုင်အဆိုင်
စီးပွားရှာနေကြတယ်။ အထက(၁၆)မန္တလေးက လုပ်သက်(၂)နှစ်သာရှိသေးတယ် ကျောင်းဆရာမလေးတစ်ဦးကို
အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်ရာထူးတိုးပေးပြီး ၄င်းရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း မယားငယ်ထားတာ အားလုံးအသိ
ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်းဗျာ၊ နှမသားချင်းတွေတောင် ဆရာမလုပ်ခိုင်းရမှာ ခပ်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေပြီ၊
ပညာရေးဌာနရဲ့ လူကြီးတွေက တကယ့်လူစွမ်းကောင်းတွေဘဲနော်။ - ဗိုလ်မှူးကြီးအုန်းမြင့်ဟာ
သုတေသနဲ့ စာစစ်ဌာနနှစ်ခုရဲ့ ညွှန်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးအေးလွင်လိုဘဲ ရုံးမှာ
မယားငယ်ဆရာမ (၂)ယောက်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အလုပ် ခေါ်ခန့်ထားတယ်။ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စတွေအတွက်
စာစစ်အတွင်းရေးမှူးနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်။ ဦးစီးဌာန(၂)ခုကို ကိုင်တွယ်ပြီး အတော်လေး
ချမ်းသာသွားပြီး အခုလည်း စာရင်းစစ်ကန့်ကွက်ချက်တွေဖြစ်ပြီး သိန်းထောင်နဲ့ချီ ပြသနာဖြစ်နေတယ်။
ကျန်တဲ့လူတွေလည်း မထူးပါဘူး။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း
ပုလင်းတူ ဘူးဆို့တွေချည်းပါဘဲ။ ကျန်ရှိသများကိုလည်း ဆက်လက်လေ့လာဖော်ပြသွားပါမည်။ အဲဒီတော့ ဒီလူတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကကျတဲ့
အခြေခံပညာရေးကဏ္ဍကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်ကြမှာလည်းလို့ မေးချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက
ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးလာရင်လည်း ဒီလူတွေ ပိုချမ်းသာ အုံးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပညာရေးကတော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေပြီ၊
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးတိုးတက်ချင်လျှင် ဒီလူတွေကို
ပထမဆုံး ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တကယ်တော်တဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ ပညာတတ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ပညာရေးကို စနစ်တစ်ခုကို မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲပေးဖို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
သုံးသပ်ပါတယ်။ Myanmar News Now သစ်ထူးလွင်
3/21/2012 07:03:00 AM
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် အတွက် ရေယာဉ်ငှားရမ်းအသုံးပြုခွင့်ကို အာဏာပိုင်တွေက တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ RFA
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂ဝ၁၂ မတ်လ ၃ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့ အောင်ပင်လယ်ကွင်းတွင် ပြုလုပ်သော ဟောပြောပွဲကို လာရောက်နားထောင်ကြသော ပရိသတ်များကို တွေ့ရစဉ်။
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ နဲ့ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မြိတ်မြို့ကို သွားရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ကို မငှားရမ်းဖို့ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်ကို အာဏာပိုင်တွေက တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့
လုံခြုံရေးအရာရှိ ဦးခွန်သာမြင့်က ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ အရင်တခေါက် လာစီစဉ်တဲ့ အချိန်တုန်းက အမက အဲဒီ ကျွန်းစုတွေကို လှည့်သွားဖို့ပေါ့။ အချိန်ရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ ရှပ်ပြေးတစ်စီး စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ တနာရီ ရေမိုင် ၂၅- ၃၀ သွားနိုင်တာပေါ့။ အဲဒါကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်ကမှ အာဏာပိုင်တွေက မငှားရဘူးဆိုပြီးတော့ ဖိအားပေးတယ်။ အာဏာပိုင် အဟောင်းရော အခုအသစ် လက်ရှိရောပေါ့။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် တခြားအမြန်ရေယာဉ်တွေ နဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ အခက်အခဲတွေရှိနေကြောင်းလည်း ဦးခွန်သာမြင့်က ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ မနေ့က နဲနဲ မြန်တဲ့ မော်တော်လေးပေါ့။ အမသွားမယ့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားတာပေါ့။ အမနေမယ့် အချိန်လောက် ရွာတွေမှာ နေပြီးတော့
ပြန်လာတာကို အဲဒါ ည ၁၀ နာရီလောက်မှ မြိတ်ကို ပြန်ရောက်တယ်။ အမကိုတော့ ည ၁၀
နာရီလောက်အထိ ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ မထားနိုင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းကုန်တော့
ရှပ်ပြေးရအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲဒါ လာလို့ မရအောင်၊ သွားလို့ မရအောင်ပေါ့၊ နောက်တခါ အန္တရာယ် များအောင်ပေါ့။"
မြိတ်အနောက်မြို့နယ်က လစ်လပ်တစ်နေရာမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းဟောပြောဖို့နေရာတွေ အတွက် ကျွန်းစုတွေ အတွင်းက ရွာကွင်းတွေမှာ စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
3/21/2012 06:43:00 AM
ချင်းလွှတ်တော် အမတ်ကို စစ်တပ် ခြိမ်းခြောက်
ချင်းပြည်နယ် မတူပီ မြို့နယ်မှာ မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး
ဆိုင်ရာ စည်းဝေးပွဲကို နယ်မြေ အခြေစိုက် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်က အနှောင့်အယှက် ပေးခဲ့သလို တိုင်းရင်းသား လူမျိူးစုများ ဖွံဖြိုးရေးပါတီ (ချင်းပြည်နယ်) ရဲ့ ပြည်နယ် လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း သေနတ်ထုတ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အဆင့်မျိူးထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ချင်းပြည်နယ်တွင်း အခုလို ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု တွေ နဲ့အတူ တခြား လူ့အခွင့်ရေးချိူးဖောက်မှုတွေ ကြုံနေရတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ချင်း လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့က ထောက်ပြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ မသင်းသီရိက ဆက်ပြောပြပေးပါအုံးရှင်။
ချင်းပြည်နယ် အနောက်တောင်ပိုင်း မှာရှိတဲ့ မတူပီမြို့ က စပေါင်းဂိတ် (
Sabawnget) ရွာမှာ မတ်လ (၈) နေ့က နေ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာရေးစည်းဝေးပွဲတွင်း အခုလိုပြသနာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Mara Evangelical Church ကနေပြီးတော့ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ ဘာသာရေးစုပေါင်းပွဲကို ဒီနှစ် မတူပီမှာ ကျင်းပတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲကျင်းပ နေစဉ် မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့မှာ ချင်းပြည်နယ် ထဲ အခြေစိုက်တဲ့ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်က ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြီး တားမြစ်တာ တွေ လုပ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပွဲကို ရောက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိူးစုများ ဖွံဖြိုးရေး ပါတီ (ချင်းပြည်နယ်) ရဲ့ ပြည်နယ် လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးပူဗန်ကျင်းက မလုပ်ဖို့ ညိနှိုင်း တဲ့အခါ တာဝန်ရှိသူ ဗိုလ်ကြီး သေနတ် ထောက်ပြီး ပြန်ခြိမ်းခြောက် တာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးပူဗန်ကျင်း ကိုယ်တိုင် ဗီအိုအေ ကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ စိုင်းဟ က လာတဲ့ ကားတွေကို နှင်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့လည်း ညနေမှာ ဧည့်စာရင်း ချက်ချင်း လုပ်ပြီးတော့ လုပ်မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု အစီအစဉ်ကို ည မှာ အကြာကြီးမလုပ်ရဘူး။ ပိတ်ရမယ် လို့ သူတို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီ ကိစ္စကို လူထုတွေက တော်တော် လည်း စိတ်ပူပန်နေကြတယ်။ လူတွေကလည်း လာပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော် တပ်မှူး ဗိုလ်ကြီးဆီကို ကျနော် သွားပြီးတော့ "ဗိုလ်ကြီး အစည်းအဝေးက ကျနော်တို့ ကျင်းပနေပြီ။" သူတို့က အစတုန်းက ခင်ဗျားတို့ ဒီလို လုပ်တာ ဟာ ကောင်းတယ်။ ပွဲတဝက် မှ ခင်ဗျားတို့ ဒီလို လုပ်တာဟာ လူတွေက စိတ်မချမ်းသာပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ပွဲကို တင်းကျပ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့ လို့ ကျနော် သွားပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီ အခါမှာ ဗိုလ်ကြီး မျိုးမင်းထိုက် က သေနတ်ကို
ချိန်ပြီးတော့ "မင်းဘာကောင်လဲ။ ဘာတွေ ပြောနေလဲ။ မင်းကို သတ်ပစ်မယ်" ဆိုပြီး သေနတ်ကို ချိန်လိုက်တယ်။ "ဟာ ခင်ဗျား ဒီလို မလုပ်ပါနဲ့။ ကျနော် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ" ဘာတွေ ဆိုတာ မကြားချင်ဘူး။ အဲဒါတွေက မပြောနဲ့ ဆိုပြီးတော့ သေနတ်ကို ချိန်တယ်လေ။”
တိုင်းရင်းသား လူမျိူးစုများ ဖွံဖြိုးရေးပါတီ (ချင်းပြည်နယ်) ရဲ့ ပြည်နယ် လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးပူဗန်ကျင်း ပါရှင်။ ဒီလိုအခြေအနေ တွေကြောင့် ညတွင်းချင်း နယ်စပ် လုံခြုံရေး ၀န်ကြီးဆီကို ဦးပူဗန်ကျင်း ကိုယ်တိုင် ဖုန်းဆက် တိုင်ကြားခဲ့တယ် လို့လည်းပြောပါတယ်။ အခုလိုမျိူး ဘာသာရေး ဖိနှိပ် ကန့်သတ်မှု ပြသနာတွေကို ချင်းပြည်နယ် တွင်း မကြာခဏ ဆိုသလို ကြုံနေရတယ်လို့လည်း ချင်း လူ့အခွင့်ရေး အဖွဲရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဆလိုင်း ဇာအုတ်ကလင်း(za Uk Ling) က ပြောပါတယ်။
“ကျနော် တို့ ဒီ အခု အချိန် အထိ ဘာသာရေး လုပ်ဆောင် ခွင့် နဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ တိုးတက်တာ ကျနော်တို့ မမြင်ရသေးပါဘူး။ ချင်းပြည်နယ်က (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း လူတွေက ခရစ်ယာန်တွေ ဖြစ်ကြတော့ အခုအချိန် အထိ သူတို့ ဒီလိုမျိုး အစည်းအဝေး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်မယ် ဆိုရင် အမြဲတမ်းဘဲ ပွဲမိန့် မပေးတာရယ်၊ အမျိုးမျိုး နှောက်ယှက်တာမျိုး ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဘာသာရေး အဆောက် အအုံတွေ ဆောက်ပိုင်ခွင့်၊ ပြင်ပိုင်ခွင့် ဆိုတဲ့ ဟာလည်း သူတို့ အခုအချိန် အထိ မရသေးပါဘူး။”
ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဖံွ့ဖြိုးမှုလည်း နှောင့်နှေးနေတဲ့ ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာ တခြားလူ့အခွင့်ရေး ချိူးဖောက်မှု တွေလည်း ရှိနေတယ် လို့လည်းဆိုပါတယ်။
“ချင်း အခွင့်အရေး အဖွဲ့အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းတင်ထားချက်အရ (၁၇)
နှစ် ရှိသွားပြီ။ ဒီနှစ် ဆိုလို ရှိရင်။ အဲဒီ အချိန်မှာ ကျနော် တို့ တွေ့ခဲ့ရတာ စစ်တပ်ရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ တပ်စွဲတဲ့ နေရာ တိုင်းမှာ၊ ဒေသ အဲဒီ
အနီးနားတဝိုက် ရဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ ဆိုရင် တော်တော်လေး အနှိပ်စက်ခံရတယ်။ အတင်း အဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်း တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါ။ ထမ်းခိုင်းတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးမျိုး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒါတွေ စစ်တပ်ရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အဲဒီလို ပြဿနာတွေ ကျနော်တို့ ကြုံတွေ့နေရတယ်။”
ချင်းလူ့အခွင့်ေ၇းအဖွဲ့က ဆလိုင်း ဇာအုတ်ကလင်း (za Uk Ling) ပြောပြခဲ့တာပါရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်ရေး ချိူးဖောက်မှု တွေဟာ နယ်မြေ တည်ငြိမ်မှု မရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ အဖြစ်များ နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ ကထောက်ပြ နေကြတာပါ။ အဲဒီလို
အခြေအနေ ထဲကမှ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီ (၁၂) ရက်နေ့ကဆိုရင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းက ယူနယ်နယ်ထဲမှာ ဒေသခံ လယ်သမားတဦးကို တရားမ၀င် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ မြန်မာစစ်သား နှစ်ဦးက သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးဖို့ တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက မြန်မာအစိုးရကို တောင်းဆိုထားတဲ့ ပြသနာမျိူး တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
3/21/2012 06:41:00 AM
မြိုင်မြို့နယ်မှ ကွမ်းတောကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ဥပဒေအတိုင်း ရွေးချယ်လို
မြိုင်၊ မတ် ၁၅
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပခုက်္ကူခရိုင်၊ မြိုင်မြို့နယ် ကွမ်းတော ကျေးရွာနေ ရွာသူရွာသားများသည် မိမိတို့ကျေး ရွာ၏ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေကြောင်း အရသာ ရွေးချယ်ခန့်အပ်လို ကြောင်း ကွမ်းတောကျေးရွာမှ ဒေသ ခံများက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး အ ပြောင်းအလဲများဖြစ်လာသည့် နည်း တူ မိမိတို့ကျေးရွာအတွင်း၌ လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးမှူးကို ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၏ ဆန်္ဒအရမဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ရာ ဦးဇော်ဇော်က ပထမ၊ ဦးကြည် မောင်ကဒုတိယ၊ ဦးဇော်နိုင်မိုးက တတိယရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် အ မှန်တကယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ် လာသည့် အခါ၌ တတိယမဲအများ ဆုံးရရှိခဲ့သူ ဦးဇော်နိုင်မိုးကသာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်လာ သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ကွမ်း တောကျေးရွာ ဒေသခံများက ပြော ကြားသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေး ချယ်ရင်တော့ အခုလိုထပ်မဖြစ်ချင် တော့ဘူး”” ဟု အသက် ၅၀ အရွယ် သနပ်ခါးခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးက ပြောကြား သည်။
ယခုကဲ့သို့ မဲအနည်းဆုံး ရရှိခဲ့ သော်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဖြစ်လာသည့် ဦးဇော်နိုင်မိုးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရွာတွင် ပျက်ကွက်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင်ရေကြီးမှုနှင့် ပတ်
သက်ပြီး လာရောက်လှူဒါန်းသည့် အကူအညီနှင့် ငွေကြေးများကို လည်း ၎င်းင်း၏ကိုယ်ကျိုးအတွက် အ သုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရွာသူ ရွာသားများက မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးဖုန်းမော်ရွှေထံ သို့ တိုင်းကြားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၀န် ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က ကွမ်းတော ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော် နိုင်မိုးအား စည်းကမ်းပျက် အုပ်ချူပ် ရေးမှူးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထား ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကွမ်းတောကျေးရွာ ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။ ““၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က သူ့ကို ပြောင်းပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနကို စာပို့ထားပြီးပြီဆိုတာ မြိုင်မြို့နယ် အုပ်ချူပ်ရေးမှူးရုံးကအသိတစ် ယောက်ပြောလို့သိထားပြီးပြီ။ ဒါပေ မယ့်သူကဒီနေ့အထိကို မပြောင်း သေးဘူး။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ ပြောင်းခိုင်းတာ သုံးကြိမ်ရှိပြီး”” ဟု ကွမ်းတောကျေးရွာ ဒေသခံတစ်ဦး ကပြောကြားသည်။
ကွမ်းတောကျေးရွာ အနီးရှိ အလယ်ကန်ကျေးရွာ၊ ကျီးကန်ကျေးရွာ၊ ကန်နီကျေးရွာများ သည် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေနည်း လမ်းကြောင်းအရ ဒေသခံများ၏ ဆန်္ဒဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ် သော်လည်း ကွမ်းတောကျေးရွာမှာ ယင်းကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ယခင်အစိုးရ လက်ထက်က အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး တည်း ကသာ ဆက်လက်အုပ်ချူပ် နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံများ၏ စုံစမ်းမှုအရ ကွမ်းတောကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ဇော်နိုင်မိုးသည် ဒေသခံ တပ်ရင်းတစ်ခု၏ကျော ထောက် နောက်ခံပေးထားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းသို့ ငွေ ကျပ် ၁၃ သိန်းပေးထားခြင်း ကြောင့်သာ ယခုကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရာထူးကို မြဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြိုင်မြို့ အမှတ်အသားတခုအနေနဲ့ သာဓါတ်ပုံထဲသွင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံ-Google Images)
3/21/2012 06:12:00 AM
နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် ဆရာ စံဇာဏီဘို (ဓါတ်ပုံ-Google Images)
ရောက်ရှိလာတော့မည့် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးကာလမှ စတင်ကာ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်များကို ဆရာစံဇာဏီဘိုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ၀ါထပ်တဲ့နှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းလဲတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးဖြစ်မယ်၊ နောက် ဒီလိုဖြစ်လာမယ့် အပြောင်းအလဲတွေက လူတွေ ထင်မှတ်ထားတာ၊ တွက်ဆထားတဲ့ အပြောင်းအလဲမျိုး မဟုတ်ဘူး၊ ပုံမှန် နဲ့မတူတဲ့ အပြောင်းအလဲလေးတွေ ဖြစ်မယ်၊ အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်တော်တုိ့ အယူအဆအရ ၀ါထပ်နှစ်လည်းဖြစ်တယ်၊ လာမယ့် ကဆုန်လပြည့် ကစပြီး၊ နယုလပြည့်အတွင်းမှာ တစ်ကြိမ် (မေ ၅ မှ ဇွန်လ ၁၈ ရက်) ၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ကနေ တော်သလင်းလပြည့်နေ့မှာ (ဇူလိုင်လ ၁၉ရက်မှစက်တင်ဘာလ ၁
ရက် ) တစ်ကြိမ် အဲဒီကာလလေး တွေမှာ ထူးခြားတဲ့ ဂြိုလ်အနေအထားလေးတွေရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရှုထောင့်မှာ မတ်လ ၂၀မှာနိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ အပြောင်းအလဲတွေရှိတယ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာလည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်ဆက်သွယ်မှု အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၇ ရက်ကစပြီး အောက်တို ဘာ ၅ ရက်အတွင်းမှာလည်း ထူးခြားတဲ့ အပြောင်း အလဲတွေ ဆက်တိုက်ရှိလာမယ်။ နောက်ပြီး အဓိက ပြသနာတစ်ခုက နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကဏ္ဍမှာ တည်ငြိမ်မှုအနေအထားနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှု အနေအထားမှာတော့ ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။ ၂ အချက် က စီးပွားရေးက တိုးတက်တာ မမြင်ဘူး။ မှန်းသလောက်
မဖြစ်လာဘူး၊ ထင်ထင်ရှားရှား တိုးတက်တာမရှိဘူး။ တန့်နေတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ ယုတ်လျှော့နေတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို မျှော်လင့်ကြ တဲ့အခါ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ နည်းပညာရှုထောင့်ရဲ့ ရုတ်ချည်းဖွံ့ဖြိုးမှုကတော့ ဇွန်လ ၂၅ ကစပြီး သြဂုတ် ၂၃ ၀န်းကျင်မှာတော့ အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲရှိတယ်၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ နည်းတာ ပေါ့လေ။
ပြည်ပကို ရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့ အနေအထား ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ မြင်တယ်။ ပြည်ပမှာ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ ပြည်တွင်းမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာ မြင်တယ်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့် ကုမ်္ပဏီ တွေရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ရှုထောင့်ကတော့ အားနည်းတယ်။ ဒေသတွင်း အခြားနိုင်ငံနဲ့ ဆက်စပ်မှုမှာတော့ အနောက် နိုင်ငံတွေရဲ့ စစ်အခြေစိုက်စခန်း ဖြစ်လာဖို့မြင်တယ်။ လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း၊ ရေတပ် အခြေစိုက်စခန်း တို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းတို့ မြင်တယ်။ စစ်ရေးအခြေစိုက်ဒေသတစ်ခုအဖြစ် မြန်မာ ပါဝင်ဖို့မြင်တယ်။
ဖြစ်လာဖို့မြင်တယ်။ လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း၊ ရေတပ် အခြေစိုက်စခန်း တို့အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းတို့ မြင်တယ်။ စစ်ရေးအခြေစိုက်ဒေသတစ်ခုအဖြစ် မြန်မာ ပါဝင်ဖို့မြင်တယ်။
ကမ်္ဘာ့အရှေ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့ ကိုရီယား၊ ဂျပန်၊ တရုတ်တို့နဲ့ စီးပွားကုန်သွယ်မှု အားကောင်းတယ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအားနည်းတယ်၊ ဥရောပ အနည်းငယ်တက်မယ်၊ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ဆက်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းတော့ ပုံမှန်ထက် အားနည်းတယ်၊ အမေရိက အနည်းငယ်တက်မယ်။ ၁၃၇၄ ခုနှစ်မှာ အရှေ့တိုင်းပြည်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆက်သွယ်မှု အားကောင်းမယ်။
ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကြီးစားတွေတော့ မမြင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် စတင်ခြင်း အချို့မြင်တယ်၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာတော့ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမှာ အားကောင်းမယ်၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကတော့ ပုံမှန်အဆင့်ပဲရှိမယ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဆိုင်ရာတွေ
မှာတော့ ဖွံ့ဖြိုးဖို့မြင်တယ်၊ အခွန်များလာမယ့် အနေအထားရှိတယ်။
လုံးဝမမြင်ဘူး၊ တစ်စုံတရာ အတိုင်းအတာထိမမြင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပုဂ်္ဂလိက နေ့စဉ် သတင်းစာဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့ ဇွန် ၆ လမှာမြင်တယ်၊ ထွက်မယ့် သဘောလောက်တော့ ရှိတယ်၊ လွပ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက်ပေးမလဲ မသိဘူး၊ လာမယ့် ဇွန်ဝန်းကျင်မှာ တစ်စောင်ကနေ သုံးစောင် ရနိုင်တယ်၊စီးပွားရေး ဆိုင်ရာမှာတော့ သိပ်မရှိဘူး၊
သဘာဝ ဘေးကတော့ တော်တော်လေး သတိထားသင့်တယ်။ မီး မီးက တောက်လျှောက် သတိထားရမယ်၊ မိုးတွင်း ပင်လျှင် သတိထားရမယ်။ ရေနဲ့ ပတ်သတ်တာ။ ရေကမရှိလို့ ရေငတ်တာရော၊ ရေကြီး ရေလျှံဖြစ်မယ်၊ နောက် မေလကုန်သြဂုတ်၊ အောက်တိုဘာမှာ
သဘာဝ ဘေးကတော့ တော်တော်လေး သတိထားသင့်တယ်။ မီး မီးက တောက်လျှောက် သတိထားရမယ်၊ မိုးတွင်း ပင်လျှင် သတိထားရမယ်။
ရေနဲ့ပတ်သတ်တာ။ ရေကမရှိလို့ ရေငတ်တာရော၊ ရေကြီး ရေလျှံဖြစ်မယ်၊ နောက် မေလကုန်သြဂုတ်၊ အောက်တိုဘာမှာ ငလျင် ဒဏ်မြင် တယ်၊
၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလည်း သတိထားရမယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှု ယန်္တယား အကြီးစားပြောင်း လဲမှု မမြင်သေးဘူး၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေရဲ့ သဘာဝမှာ ဖိတ်ခေါ်မှုရှိပေမယ့် အကြီးစားရင်းနှီးမြုပ်နှံတာမျိုး
မမြင်ဘူး။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေ ပူးပေါင်းလုပ်တာမြင်တယ်၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေ အပြည့်အ၀ လုပ်တာတော့ မမြင်ဘူး။
အဲဒီနှစ်မှာ ထူးခြားတာက မြန်မာနိုင်ငံအောက် ပိုင်းတွေမှာ အရမ်းဖွံ့ဖြိုးမယ်။ ရန်ကုန်၊ ပုသိမ်၊ မော်လမြိုင်
ရန်ကုန်နဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အဆင် ပြေမှုတွေ မြင်တယ်။ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အတင်းအကြပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံ တကာ အဆင့်မ၀င်တာက ဒေသခံပြဿနာကြောင့်လို့ ဗေဒင်အရ မြင်နိုင်တယ်၊။ The Express Times
ကျောက်ဖြူမြို့ (ဓါတ်ပုံ-Google Images)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ပျားတဲကျေးရွာတွင် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းသွားသော လယ်မြေအတွက်ရရှိသည့်လျော်ကြေးအာ
း ကြတ်တိန်ကျေးရွာအုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်စိန်ချမ်းက ငွေ ၁၉၉၈၀၀၀ (ဆယ့်ကိုးသိန်းကိုးသောင်းရှစ်ထောင်) ကျပ်ကို အတင်း အဓမ္မထုတ်ယူသွားကြောင်း လယ်မြေပိုင်ရှင် ဒေါ်စံဂိုးမက ပြောကြားပါသည်။
လယ်ယာမြေကွင်းအမှတ် (၄၇၄/၁) ၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဒေါ်စံဂိုးမ၏
အမျိုးသား ဦးမောင်ကျန်ချီးဖြစ်ပြီး ၄င်းမှာ လေဖြတ်ရောဂါခံစားနေရပါသဖြင့်
မည်သည့် အလုပ်အကိုင်မျှ မလုပ်နိုင်တော့ကြောင်း၊ ထိုမြေအားလျာ်ကြေးပေးရာတွင် ဦးမောင်ကျန်ချီးအမည်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ လုံးဝဆက်စပ်ပတ်သက်မှုမရှိသော ဦးအောင်စိန်ချမ်း (ဘ) ဦးအောင်ထွန်းဦး အမည်ဖြင့်သာ အမည်ပေါက်လာကြောင်း ယင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ၄င်းထုတ်ယူသွားသောလျော်ကြေးငွေမှ
ပမာဏအချို့ကို ပေးရန် တောင်းဆိုရာတွင် ကြတ်တိန် ကျေးရွာအုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်စိန်ချမ်းက ငွေလုံးဝမပေးဘဲ ‘ငွေလိုချင်ရင် တိုင်ချင်သည့်နေရာတွင်သွားတိုင်’ ဟု ရိုင်းပြစွာပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဒေါ်စံဂိုးမကပြောကြားခဲ့သည်။
3/21/2012 05:44:00 AM